3001s &quot;Okwukwe nke na-edozi esemokwu&quot; na pastọ Rick Warren images and subtitles
- Ndewo, onye obula, abu m Rick Warren, pastọ na Saddleback Church na ode akwụkwọ nke “Nzube Obi Ndụ” na ọkà okwu na mmemme “Daily Hope”. Daalụ maka itinye aka na mgbasa ozi a. Know mara, n'izu a na Orange County, California, gọọmentị kwupụtara na ha na-amachibido iwu nzukọ niile n'ụdị ọ bụla, nke ọ bụla rue ngwụcha ọnwa. N’ihi ya, nabata Saddleback Church n’ụlọ. Obi dị m ụtọ na ị nọ ebe a. Ana m eji vidiyo na-ezi gị ihe n'etiti ugbu a na mgbe ọ bụla nsogbu COVID-19 na-akwụsị. N’ihi ya, nabata Saddleback Church n’ụlọ. Achọrọ m ịkpọ gị ka ị soro m kwa izu, bụrụ akụkụ nke ofufe a niile. Anyi g’eme egwu ma fee ofufe, m ga na-ezikwa okwu n’Okwu Chineke. Ma, dịka m chere maka nke a, Site n'ụzọ, aga m ebu ụzọ gwa gị. Echere m na ha ga-ewepụrịrị anyị nzukọ. Ma otu izu a, enwere m Saddleback studio kwagara mgbo. M na-akụ ihe a na ụgbọala m. Ndị ọrụ aka ọkpụkpụ m. Batanụ banye, ụmụ nwoke, kwuo nụ mmadụ niile. (ịchị ọchị) Ha nyere aka ibughari ya ebe a ma dozie ya ka anyị wee nwee ike ịgwa gị okwu kwa izu. Ugbu a, dịka m chere banyere ihe anyị kwesịrị ikpuchi n'oge nsogbu COVID-19, Echere m ozugbo banyere akwụkwọ James. Akwụkwọ James bụ obere akwụkwọ na nso ogwugwu nke agba ohu. Ma ọ bara uru ma ọ na-enye aka, ana m akpọkwa akwụkwọ a okwukwe nke na-arụ ọrụ mgbe ndụ adịghị. Echere m ma ọ bụrụ na achọrọ ihe ọ bụla ugbu a, okwukwe dị anyị mkpa ma ọ bụrụ na ndụ adịghị. N'ihi na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma ugbu a. Yabụ taa, n'izu a, anyị ga amalite njem na -aga gị ga-agba gị ume site na nsogbu a. Achọghịkwa m ka ị hapụ ozi nke ọ bụla. N'ihi na akwụkwọ Jems kwuru n'ezie ihe iri na anọ dị mkpa ihe mgbochi ndu, ndu ndu 14, 14 ebe n’otu n’otu n’otu already nweela nsogbu na ndụ gị, ị ga-esokwa emekọrịta ihe n’ọdịnihu. Dịka ọmụmaatụ, na isi nke James, ka m nye gi obere nnyocha banyere akwukwo a. Ọ bụ naanị isi anọ. Isi nke mbụ, ọ na-ebu ụzọ kwuo banyere ihe isi ike. Anyị ga na-ekwu maka nke ahụ taa. Gini bu uche Chukwu maka nsogbu gi? Ọ na-ekwukwa banyere nhọrọ. Kedu ka esi eme uche gị? Kedụ ka isiri mara mgbe ị ga-anọ, oge ị ga-aga? Kedu ka ị si eme, ị na-eme mkpebi? Ma ọ na ekwu maka ọnwụnwa. Anyị ga-elele otu i si merie ọnwụnwa niile na ndu gi nke dika odi ka oghara ime ka gi ghara imebi. Ma ọ na-ekwu banyere nduzi. Ọ na-ekwu maka etu Akwụkwọ Nsọ ga-esi gọzie anyị. Ọbụghị naanị gụọ ya, kama ka ọ gọzie gị. Nke ahụ bụ na isi nke mbụ. Anyị ga-eleba anya na ndị ahụ n'izu ndị na-abịa. Isi nke abụọ kwuru banyere mmekọrịta. Anyị ga-eleba anya n’otú i si emeso ndị mmadụ ihe. Gị na ndị mmadụ ga-anọ n'ụlọ, n'ime ezinụlọ niile, ụmụaka na nne na nna. ndị mmadụ na-enwekwa ike ịna-emegwara ndị ọzọ. Nke ahụ ga-abụ ozi dị mkpa na mmekọrịta. Mgbe ahụ ọ na-ekwu banyere okwukwe. Kedu otu ị ga - esi tụkwasị Chineke obi mgbe ọ naghị adị gị otú ahụ ma mgbe ihe na-aga n'ụzọ adịghị mma? Nke ahụ bụ na isi nke abụọ. Isi nke atọ, anyị ga-ekwu maka mkparịta ụka. Ike nke mkparịta ụka. Ma na nke a bụ otu n’ime amaokwu kachasị mkpa N’ime Akwụkwọ Nsọ gbasara otu esi ejikwa ọnụ gị. Nke ahụ dị mkpa ma anyị nọ na nsogbu ma ọ bụ na anyị abịaghị. Ma ọ na-ekwu banyere ọbụbụenyi. Ọ na-enyekwa anyị ozi bara uru kedu ka ị ga-esi nwee ezi ndị enyi ma zere ọbụbụenyi na-amaghị ihe. Nke ahụ bụ isi atọ. Isi nke anọ dị na esemokwu. Na isi nke anọ, anyị na-ekwu maka ya kedu ka ị ga - esi ezere arụmụka. Nke ahụ ga - enyere gị aka n'ezie. Ka esemokwu ebilite na nkụda mmụọ, ka ndị mmadụ n’enweghị ọrụ, olee otu ị ga - esi zere arụmụka? Mgbe ahụ ọ na-ekwu banyere ikpe ndị ọzọ ikpe. Kedu ka ị ga-esi kwụsị ịkpọ Chineke? Nke ahụ ga-eweta ọtụtụ udo na ndụ anyị ọ bụrụ na anyị nwere ike ime nke ahụ. Mgbe ahụ ọ na-ekwu maka ọdịnihu. Kedụ ka ị si akwado maka ọdịnihu? Nke a bụ isi nke anọ. Ugbu a, na isi nke ikpeazụ, isi nke ise, agwara m gị enwere isiakwụkwọ anọ, enwere n'ezie isi ise na Jemes. Anyi na ekwu maka ego. Ọ na-ekwukwa banyere etu ị ga-esi jiri akụ na ụba gị mara ihe. Anyi na ewee lee ntachi obi. Gịnị ka ị na-eme mgbe ichere Chineke? Thelọ kachasị sie ike ịnọ ọdụ di n’ime ulo nchere ihe ma ino ososo na nke Chineke. Anyi na-ele anya n’ekpere, nke bu ozi ikpe azu anyi ga elele. Olee otu i si ekpe ekpere maka nsogbu gi? Akwụkwọ Nsọ sị na enwere ụzọ isi kpee ekpere ma nweta azịza, ma enwere ụzọ isi kpee ekpere. Anyị ga na-elekwa nke ahụ anya. Ugbu a taa, anyị ga na-ele anya na amaokwu isii mbụ nke akwụkwọ Jems. Ọ bụrụ na ịnweghị Bible, m chọrọ ka ị budata ndepụta nke weebụsaịtị a, akwụkwọ nkuzi, n’ihi na amaokwu niile anyị ga-eleba anya d ị n'ihe ndepụta gị. Jemes isi nke mbụ, amaokwu isii nke mbụ. Na Bible na-ekwu nke a mgbe ọ na-ekwu okwu banyere ibuputa nsogbu gi. Nke mbu, Jemes 1: 1 kwuru nke a. Jemes, orù nke Chineke na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, ebo iri na abụọ ahụ gbasasịrị n’etiti mba nile, ekele. Ugbu a, ka m kwụsịtụ ebe a otu nkeji wee kwuo nke a bu iwebata n’uche nke akwukwo obula na akwukwo nso. Maka na ị maara onye James bụ? Ọ bụ nwa nwoke nke Jizọs. Kedu ihe ị pụtara site na nke ahụ? Ọ pụtara na ọ bụ Meri na nwa Josef. Jizọs bụ naanị nwa Meri. Ọ bụghị nwa Josef n'ihi na Chineke bụ nna Jizọs. Ma Akwụkwọ Nsọ gwara anyị na Meri na Josef mụrụ ọtụtụ ụmụ mgbe oge na-aga, ma na - enyekwa anyị aha ha. James abụghị Onye Kraịst. Ọ bụghị onye na-eso ụzọ Kraịst. O kwenyeghi na nwanne nne ya nwoke bụ Mesaya ahụ n'oge ije ozi Jizọs niile. Ọ bụ onye obi abụọ. Ma ị ga-eche na nke ahụ, nwanne nwoke nke okenye ekweghị na nwanne nwoke nke okenye, nke ahụ ga-abụ ihe doro anya. Nso ikanam James enịm ke Jesus Christ? Mbilite n’ọnwụ. Mgbe Jizọs si n'ọnwụ bilitere ma na-eje ije Jekob we hu ya, ọgu ubọchi abua. ọ ghọrọ onye kwere ekwe ma mesịa bụrụ onye ndu na Nzukọ nke Jerusalem. Yabụ ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ikike ịtụfu aha, ọ bụ dimkpa a. Ọ nwere ike ikwu, James, bụ nwoke ahụ toro Jizọs. Jemes, nwanne nwoke nke Jizọs. James, ezigbo enyi Jizọs toro. Thosedị ihe ndị ahụ, mana ọ naghị. Naanị ihe ọ na-ekwu bụ Jems, ohu Chineke. Ọ dịghị adọtị ọkwa, ọ naghị akwalite ọganịhu ya. Ma mgbe ahụ n'amaokwu nke abụọ, ọ na-amalite ịbanye mbipụta a nke mbụ banyere nzube Chineke na nsogbu gị. Ka m gụpụtara gị ya. O kwuru, mgbe ụdị ọnwụnwa niile juputa na ndu gi, ewesola ha iwe dika ihe ojoo, kama nabata ha dika ndi enyi. Ghọta na ha bịara ile okwukwe gị, na imepụta njiri ntachi obi n’ime gị. Mana ka usoro ahụ gaa n'ihu ruo ntachi obi ahụ tozuola ogo, i gha abu mmadu nke ntozu oke na iguzosi ike n'ezi ihe na-enweghị ntụpọ na-adịghị ike. Nke ahụ bụ nsụgharị Phillips nke James isi otu, amaokwu abụọ ruo isii. Ugbu a, ọ na - ekwu mgbe ụdị ọnwụnwa niile batara na ndụ gị ma ha rabara gi ndu, O kwuru, ewela iwe ka ndi n’ekwe nti, nabata ha dika enyi. Ọ sị, ị nwee nsogbu, nwee ọ happyụ. I nwere nsogbu, rejoiceụrịa ọ .ụ. Problems nwere nsogbu, mụmụọ ọnụ ọchị. Ugbu a, ama m ihe ị na-eche. Go na-aga, ị na-egwu m? Kedu ihe m ga - eji nwee obi ụtọ gbasara COVID-19? Gini mere m ji nabata ule ndi a na ndu m? Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Igodo nke omume a niile àgwà ziri ezi n'etiti nsogbu bụ okwu ghọta, ọ bụ okwu ghọta. O kwuru, mgbe ụdị ọnwụnwa a niile juputa na ndu gi, ewesola ha iwe dika ihe ojoo, kama nabata ha dika ndi enyi, wee ghọta, jupụta Ha na-abịa nwalee okwukwe gị. Mgbe ahụ ọ gara n’ihu, ihe ọ na-amịpụta na ndụ ha. Ihe ọ na-ekwu ebe a bụ na ọganiihu gị n’iru gị izu ndị ga-abịa n’ihu ajọ ọrịa a COVID-19 nke ahụ bụ ugbu a gburugburu ụwa, yana karia Mba dị iche iche na-emechi emechi emechikwa emechi ụlọ nri na ha na-emechi ụlọ ahịa, ha na-emechi ụlọ akwụkwọ, ha na-emechi ụlọ ụka dị iche iche, ha n shutmechi ebe ọ bula ebe ndị mmadụ na-ezukọ, dịkwa ka ebe a na Orange County, ebe enyeghi anyi ohere isoro onye obula mee onwa a. Ọ na-ekwu, ihe ịga nke ọma gị n’ịhụ nsogbu ndị a A ga-eji nghọta gị kpebie ya. Site na nghọta gị. Sitekwa na omume gị n'ebe nsogbu ndị ahụ dị. Ọ bụ ihe ị ghọtara, ọ bụ ihe ị ma. Ugbu a, ihe mbụ na akụkụ Akwụkwọ Nsọ Achọrọ m ka ị ghọta bụ na Chineke nyere anyị ihe ncheta anọ gbasara nsogbu. I nwere ike chọọ dee ihe ndị a. Ihe ncheta anọ gbasara nsogbu na ndụ gị, nke gụnyere nsogbu anyị na-enwe ugbu a. Nke mbụ, ọ buru ụzọ kwuo, nsogbu agaghị adịrịrị. Nsogbu bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ugbu a, olee otu o si na-ekwu nke a? Ọ na - ekwu, mgbe ụdị ọnwụnwa niile bịara. Ọ naghị ekwu ma ụdị ọnwụnwa niile bịa, ọ na-ekwu mgbe. You nwere ike ịtụkwasị ya obi. Nke a abụghị igwe ebe ihe niile zuru oke. Nke a bụ wherewa ebe ihe niile mebiri emebi. Ọ na-asịkwa na ị ga-enwe nsogbu, ị ga-enwe nsogbu, ị nwere ike ịtụkwasị ya obi, ị nwere ike ịzụta ngwaahịa na ya. Ugbu a, nke a abụghị ihe James na-ekwu naanị. N'ime akwụkwọ nsọ, o kwuru ya. Jizọs kwuru n ’ụwa ị ga-enwe ọnwụnwa na ọnwụnwa, ị ga-enwe mkpagbu. O kwuru na ị ga-enwe nsogbu na ndụ. Yabụ kedu ihe mere eji eju anyị mgbe anyị nwere nsogbu? Peter wee sị ya atụla gị n'anya mgbe ị na -agabiga ọnwụnwa dị egwu. Kwuru na-eme adịghị ka ọ bụ ihe ọhụrụ. Onye ọ bụla na-enwe oge ihe isi ike. Ndụ siri ike. Nke a abụghị igwe, nke a bụ .wa. Onweghi onye oria, enweghi onye obula, ọnweghị onye ọ bụla mkpuchi, enweghị onye ọpụpụ. Ọ na-ekwu na ị ga-enwe nsogbu n'ihi na ha adighi agha agha. Know mara, echetara m otu oge mgbe m nọ na kọleji. Ọtụtụ afọ gara aga, aga m agabiga ụfọdụ siri ike n'oge. Amalitere m ikpe ekpere, m kwuru, "Chineke, nye m ndidi." Utu ke mme idomo oro ọyọkọri, mmọ ẹma ẹkan. M wee sị, "Chineke, ọ dị m mkpa inwe ndidi," Nsogbu ahụ bịara ka njọ. M wee sị, "Chineke, ọ dị m mkpa inwe ndidi," Ha kara njọ. Gịnị na-eme? N’ikpeazụ, achọpụtara m na mgbe ihe dị ka ọnwa isii gachara. Enwere m ndidi karịa karịa mgbe m malitere, na ụzọ Chineke si na-ezi m ndidi bụ ihe isi ike ndị ahụ. Ugbu a, nsogbu abụghị ụfọdụ usoro nhọrọ na ị nwere nhọrọ ị ga-eme na ndụ. Ee e, a chọrọ ha, ị nweghị ike ịpụ na ha. Iji gụchaa akwụkwọ nke ndụ, ị ga-aga ụlọ akwụkwọ nke ọkpọ ọkpọ. Ga na-agabiga nsogbu, ha enweghị atụ. Nke ahụ bụ ihe Baịbụl kwuru. Ihe nke abuo Bible kwuru banyere nsogbu bu nke a. Nsogbu na-agbanwe, nke pụtara na ha abụghị otu. Don'tnweghi otu nsogbu na otu. Na-enweta ọtụtụ ndị dị iche iche. Ọ bụghị naanị na ị ga-enweta 'em, kama ị na-enweta ndị dị iche. Ọ na-ekwu mgbe ị na-anwale ọnwụnwa, mgbe ị nwere ụdị nsogbu dị iche iche. I nwere ike gbaa okirikiri ma ọ bụrụ na ị na-edetu ihe. Mgbe ụdị ọnwụnwa niile batara na ndụ gị. Mara, abụ m onye ọrụ ubi, otu oge m wee mụọ ọmụmụ, achọpụtara m na gọọmentị dị ebe a na United States ka nkewa 205 ata di iche iche. Echere m na 80% n'ime ha na-eto n'ubi m. (ịchị ọchị) M na-echekarị na mgbe m na-akọ akwụkwọ nri, Ekwesịrị m ịbanye na Warren's ahihia Ahịa. Ma e nwere ọtụtụ ụdị ata, ọtutu ọnwunwa di kwa, enwere ọtụtụ nsogbu dị iche iche. Ha na-abịa n'ọtụtụ nha, ha na-abịa n'ụdị niile. E nwere ihe karịrị iri atọ na atọ. Okwu a ebe a, ụdị dị iche iche, ebe ọ na-ekwu enwere ụdị ọnwụnwa niile na ndụ gị, n'eziokwu, n'asụsụ Grik pụtara ọtụtụ ihe. N'ikwu ya, enwere otutu ndo nke nchekasị na ndụ gị, ị ga-ekwenye na nke ahụ? Enwere ọtụtụ ndo nke nrụgide. Ha niile eleghi anya otu. E nwere nrụgide ụkọ, enwere nsogbu nrụgide, enwere ahụ ike, e nwere nrụgide anụ ahụ, enwere nsogbu oge. Ọ na-ekwu na ha niile bụcha agba. Ma ọ bụrụ n’ị pụọ ma ịzụta ụgbọ ala, ịchọrọ agba agba, ị ga-echere ya. Ma emechaa, mgbe ị mepụtara ya, ị ga - enweta ụcha omenala gị. Nke ahụ bụ eziokwu bụ okwu eji. Ọ bụ agba omenala, ọnwụnwa dị ọtụtụ na ndụ gị. Chineke kwere ka ihe kpatara ya. Fọdụ n'ime nsogbu gị bụ nke emere. Somefọdụ n'ime ha bụ ndị niile anyị niile nwetara, dị ka nke a, COVID-19. Mana ọ na-ekwu na nsogbu na-agbanwe. Ma ihe m na-ekwu na nke ahụ bụ na ha dịgasị iche na ike. N’aka ozo, lee ka ha si bia. Ha na-agbakọta ugboro ugboro, nke ahụ bụ ogologo oge. Anyị amaghị ka nke a ga-adịru. Anyị amaghị ike etu o si aga. Ahụrụ m ihe ịrịba ama n’ụbọchị ahụ nke sị, Mmiri na-ezo n'ime ndụ niile, "ma nke a bụ ihe nzuzu." (ịchị ọchị) Echere m na nke ahụ bụ ụzọ ọtụtụ mmadụ na-enwe mmetụta ugbu a. Nke a bụ ihe nzuzu. Nsogbu adighi agha agha, ha na agbanwe agbanwe. Ihe nke ato Jemes kwuru ya n’ihi ya awughi ujo bụ nsogbu enweghị atụ. Ha anaghị ama amụma. Ọ na-ekwu mgbe ọnwụnwa bara ụba n'ime ndụ gị, ọ bụrụ na ị na-edetu ihe, kewaa ahịrịokwu ahụ. Ha ga-adaba na ndụ gị. Lee, nsogbu adịghị abịa mgbe ọ bụla ịchọrọ ya ma ọ bụ mgbe ịchọghị ya. Ọ na-abịa mgbe ọ chọrọ ịbịa. Nke ahụ bụ akụkụ nke ihe kpatara ya kpatara nsogbu. Nsogbu na-ab ụ oge kachasị mma. Ever nweela mgbe ọ dị gị ka nsogbu batara n’ime ndụ gị, ị ga, ọ bụghị ugbu a. N’ezie, dị ka ugbu a? N'ebe a na Saddleback Church, anyị nọ na nnukwu mkpọsa na-eche maka odinihu. Na mberede na coronavirus etiwaara. M na-aga, ọ bụghị ugbu a. (chuckles) Ọ bụghị ugbu a. Nweela taya dị larịị mgbe ị bịaghị n'oge? Tire gaghị enweta taya eji eme ihe mgbe ị nwere ọtụtụ oge. Na-aga ọsọ ọsọ ịga ebe ọ bụla. Ọ dị ka nwị wet na akwa ọhụrụ gị ka ị na-apụ maka njikọ mgbede dị mkpa. Ma ọ bụ kewaa akpa gị tupu gị ekwuo okwu. Nke ahụ mere m otu oge na Sọnde ogologo oge gara aga. Peoplefọdụ ndị, ha enweghị ndidi, ha enweghị ike ichere ọnụ ụzọ na-agbanwe agbanwe. Ha nwerezi, ha ga eme ya, ha ga-eme ya ugbu a, ha ga-eme ya ugbu a. Echetere m ọtụtụ afọ gara aga m nọ na Japan, m guzoro n’ọdụ ụgbọ oloko na-eche ụzọ ụgbọ oloko ibata, mgbe o mepere, ọnụ ụzọ mepere, na nwa okorobịa Japan Enweghị m ihe ọ bụla gbara m n'ahụ́ ka m guzo ebe ahụ. Echere m, gịnị kpatara m, gịnị kpatara ugbu a? Ha bụ nke a na-akọghị, ha na-abịa mgbe ị chọghị 'em. Nwere ike ị gaghị enwe ike ịkọ nsogbu na ndụ gị. Hụ ugbu a, o kwuru mgbe ụdị ọnwụnwa niile, mgbe, ha enweghị atụ, ụdị dị iche iche, ha agbanwe, ịbanye n'ime ndụ gị, nke ahụ bụ ihe a na-enweghị ike ịkọwapụta, ọ sị ha ewela iwe dị ka ndị na-egbochi gị. Kedu ihe ọ na-ekwu ebe a? Agaba, m ga-akọwacha nke a. Mana lee ihe nke anọ Akwụkwọ Nsọ kwuru maka nsogbu. Nsogbu nwere nzube. Nsogbu nwere nzube. Chineke nwere nzube n’ihe niile. Ọbụ ihe ọjọọ ndị na-eme na ndụ anyị. Chineke nwere ike weta ihe ha mma. Ọ bụghị Chineke kpatara nsogbu niile. Imirikiti nsogbu anyị na-akpatara onwe anyị. Ndị mmadụ na-ekwu, gịnị kpatara ndị mmadụ ji arịa ọrịa? Otu ihe kpatara ya bụ na anyị anaghị eme ihe Chineke gwara anyị mee. Ọ bụrụ na anyị rie ihe Chineke gwara anyị ka anyị rie, ọ bụrụ na anyị rahụ ụra dịka Chukwu gwara anyị ka anyị zuru ike, ọ bụrụ na anyị na-emega ahụ dị ka Chineke gwara anyị ka anyị na-eme, ma ọ bụrụ na anyị ekweghị ka echiche ndị na-adịghị mma banye na ndụ anyị ọ bụrụ na anyị erubere Chineke isi, anyị agaghị enwe ọtụtụ nsogbu anyị. Nnyocha e mere egosiwo na ihe dịka 80% nke nsogbu ahụike na obodo a, na America, ka a na-akpọ site na ihe a na-akpọ nhọrọ ndụ na-adịghị ala ala. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị anaghị eme ihe ziri ezi. Anyị anaghị eme ahụike. Anyị na-emekarị ihe na-emebi ihe. Mana ihe ọ na-ekwu bụ ebe a, nsogbu nwere nzube. Ọ na - ekwu mgbe nsogbu bịaara gị. mara na ha bia imeputa. Gburugburu nkebi ahịrịokwu ahụ, ha na-abịa mepụta. Nsogbu nwere ike rụpụta ihe. Ugbu a, ha anaghị arụpụta ihe na-akpaghị aka. Nje virus a bụ COVID, ọ bụrụ na m zaghị ya n 'ụbọchị kwesịrị ya. ọ gaghị emepụta ihe ọ bụla dị ukwuu na ndụ m. Ma ọ bụrụ na m zaghachi n'ụzọ ziri ezi, ọbụna ihe ndị kacha njọ na ndụ m pụrụ iweta uto na uru na ngọzi, na ndu gi na ndu m. Ha na-abịa rụpụta ihe. Ọ na-ekwu ebe a na nhụjuanya na nrụgide na iru uju, ee, na ọrịa nwere ike rụpụta ihe nke bara uru ma ọ bụrụ na anyị ahapụ ya. Ọ bụ na nhọrọ anyị, ọ bụ na omume anyị. Chineke na-eji ihe isi ike na ndụ anyị. Say sị, nke ọma, kedu ka o si eme nke ahụ? Olee otu Chukwu si eji ihe isi ike na nsogbu na ndu anyi? Ọ dị mma, daalụ maka ịrịọ, n'ihi na akụkụ ọzọ ma ọ bụ akụkụ ọzọ nke amaokwu kwuru na Chineke ji ha ụzọ atọ. Uzo ato, Chukwu jiri nsogbu na ndu gi uzo ato. Nke mbu, nsogbu dikwara okwukwe m. Ugbu a, okwukwe gị dị ka akwara. Akwara ike adighi ike ma oburu n’inyocha ya, ọ gwụla ma agbatịghị ya, ọ gwụla ma ọ bụ nrụgide. Zụlite mọzụlụ siri ike site n'imeghị ihe ọ bụla. You tolite mọzụlụ siri ike site na ịgbatị ha ma wusie ha ike ma nwalee ha ma kwagide ha ruo n’ókè. Ọ na-ekwu na nsogbu bịara ile okwukwe m ule. Ọ na-ekwu ghọta na ha bịara ile okwukwe gị ule. Ugbu a, ule okwu ahụ ebe ahụ, nke ahụ bụ okwu N’oge Baịbụl, e ji mee ihe iji mee ka ọla dị mma. Ihe ị ga - eme bụ ị ga - ewere ọla dị oke ọnụ ahịa dị ka ọla ọcha ma ọ bụ ọla edo ma ọ bụ ihe ọzọ, you ga-etinye ya n’ime nnukwu ite, ị ga-ekpo ya ọkụ ka oke okpomoku di ike, gini mere? N’ime okpomoku di elu, a gbachapụrụ adịghị ọcha niile ọkụ. Naanị ihe fọdụụrụ ya bụ ezigbo ọla edo ma ọ bụ ọla ọcha dị ọcha. Nke ahụ bụ okwu Greek ebe a maka nnwale. Ọ bụ ọkụ na - anụcha ebe Chineke na - ekpo ọkụ na-anabata nke ahụ na ndụ anyị, Ọ na-ewepụ ihe ndị na-adịghị mkpa. Know mara ihe ga - eme n’izu ole na ole sochirinụ? Ihe anyị niile chere bụ ihe dị mkpa, anyị ga-ahụ, hmm, mụ esoro ọ dị mma na-enweghị nke ahụ. Ọ ga-atagharịa ihe ndị kacha mkpa, nihi na ihe gha agbanwe. Ugbu a, atụ dị mkpa banyere etu nsogbu si nwalee okwukwe gị bụ akụkọ banyere Job n’ime Akwụkwọ Nsọ. Odi akwukwo zuru ezu banyere Job. Know mara, Job bụ nwoke kachasị baa ọgaranya na Bible, n’otu ụbọchị, ihe niile funahụrụ ya. Ezinụ ezinụlọ ya funahụrụ ya, ihe niile o nwere gwụrụ, ndị enyi ya nwụrụ, ndị na-eyi ọha egwu wakporo ezinụlọ ya, o nwere oria di egwu, o na-egbu mgbu nke ukwuu nke ahụ enweghị ike ịgwọ. Ọ dị mma, ọ bụ ọnụ. Ma, Chineke nwara okwukwe ya. Chineke emesighachikwara ya okpukpu abụọ ihe o nwere tupu ọ gabiga nnukwu nnwale ahụ. N'otu oge, m na-agụ see okwu ebe ogologo oge gara aga nke ahụ kwuru na ndị mmadụ dị ka akpa tii. Really maghị n’ezie ihe nọ ‘em ruo mgbe ị tufuru ‘em na mmiri ọkụ. Na mgbe ahụ ị ga - ahụ ihe dị n'ime ha. Ever nwetụla otu n'ime ụbọchị mmiri ọkụ ahụ? Ever nwetụla otu n'ime mmiri ọkụ ahụ izu ma ọ bụ ọnwa? Anyị nọ n'ọnọdụ mmiri ọkụ ugbu a. Ihe g’eme si gi puta bu ihe di n’ime gi. Ọ dị ka ntacha eze. Ọ bụrụ na m nwere ihe nhicha eze na m na-akụ ya, kedu ihe ga-apụta? Say kwuru, nke ọma, eze nhicha ahụ. Mba, ọ bụchaghị. Ọ nwere ike ịsị eze ezé na mpụga, mana enwere ike ịnwe ihendori marinara ma ọ bụ agwa ahụekere ma ọ bụ Mayonezi dị n'ime. Kedu ihe ga-apụta ma ọ bụrụ na a rụgide ya bụ ihe ọ bụla dị na ya. N’ụbọchị dị n’ihu ka ị na --eme ọgwụ nje COVID, ihe g’abia n’ime gị bụ ihe dị n’ime gị. Ọ bụrụ na iwe juru gị obi, nke ahụ ga-apụta. Ọ bụrụ na iwe juru gị obi, nke ahụ ga-apụta. Ma oburu na iwe juputara na iwe ma obu obi ojoo ma obu ikpe ma ọ bụ ihere ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi, nke ahụ ga-apụta. Ọ bụrụ na ụjọ juputara na nke ahụ, ihe ọ bụla dị gị n’ime bụ ihe ga - apụta ma ọ bụrụ na etinye gị nrụgide. Ọ bụkwa ihe ọ na-ekwu ebe a, nsogbu ndị ahụ na-ele okwukwe m ule. Know mara, afọ ndị gara aga, ezutere m otu agadi nwoke n'ezie na ogbako ọtụtụ afọ gara aga laghachi na Ọwụwa Anyanwụ. Echere m na ọ bụ Tennessee. Ma ya, agadi nwoke a gwara m otu esi apụ bụ uru kasịnụ na ndụ ya. M wee sị, "Ọ dị mma, achọrọ m ịnụ akụkọ a. "Gwa m ihe niile gbasara ya." Ma ihe ọ bụ ọ rụrụ ọrụ na mbadamba osisi ndu ya nile. Ọ ga-abụ onye na-achọta ndụ ya niile. Ma otu ubochi n'oge onodu aku na uba dara, onye isi ya batara wee kwuwapụta na mberede, "A chụrụ gị ọkụ." Ndị ya niile maara ihe wee pụọ n'ọnụ ụzọ. Ma nwunye ya nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri anọ na ezinụlọ na enweghị ọrụ ọrụ ndị ọzọ gbara ya gburugburu, mbibi wee na-aga n’oge ahụ. Obi-ya we di ume, ya we tua egwu. Offọdụ n’ime unu nwere ike inwe mmetụta ahụ ugbu a. Enwere ike ịhapụ gị. Eleghị anya ị na-atụ egwu na ị ga-abụ tọgbọ n'oge nsogbu a. Obi jọrọ ya njọ, ụjọ na-atụkwa ya. Ọ sịrị, edere m ihe a, ọ sịrị, "Ọ dị m ka "ụwa m mara jijiji n'ụbọchị a chụrụ m n'ọrụ. "Ma mgbe m laa n'ụlọ, m gwara nwunye m ihe mere, "ọ jụkwara, 'Gịnịzi ka ị ga-eme ugbu a?' "M kwuru, mgbe ahụ kemgbe m chụrụ n'ọrụ, "M ga-eme ihe m chọrọ mgbe niile. “Bụrụ onye na-ewu ụlọ. “M ga na-akwụ ụgwọ ụlọ anyị "M ga-abanyekwa n'ọrụ ụlọ iwu." Ọ gwakwara m, "Rick, ị maara ihe mbu m mere "Ọ bụ iwu obere obere motels abụọ." Nke ahụ bụ ihe o mere. Ma ọ sịrị, "N'ime afọ ise, abụ m onye isi ọtụtụ nde mmadụ." Aha nwoke ahụ, onye mụ na ya na-agwa okwu, bụ Wallace Johnson, yana azụmahịa ọ malitere mgbe agbachara ya akwụkwọ a kpọrọ Holiday Inns. Inns ezumike. Wallace gwara m, "Rick, taa, ọ bụrụ na m nwere ike ịchọta "nwoke gbara m ọrụ, m ga-eji obi m niile "kelee ya maka ihe o mere." N’oge ahụ mgbe ọ mere, Aghọtaghị m kedu ihe mere eji chụọ m n'ọrụ, kedu ihe mere eji chụpụ m. Ma mgbe e mechara, achọpụtara m na ọ bụ ihe mere Chineke na atụmatụ dị ebube iji tinye m n'ọrụ nke ndị ọ họọrọ. Nsogbu nwere nzube. Ha nwere ebumnuche. Ghọta na ha bịara imepụta, na otu n'ime ihe mbụ ha mepụtara karịa okwukwe ka ukwuu, ha nwale okwukwe gị. Nọmba nke abụọ, nke a bụ uru nke abụọ nke nsogbu. Nsogbu na-ewusi ntachi obi m. Ha na-azụ ntachi obi m. Nke ahụ bụ akụkụ ọzọ nkebi ahịrịokwu ahụ, ọ na-ekwu nsogbu ndị a na-abịa nwee ntachi obi. Ha na-etolite ntachi obi na ndụ gị. Gịnị bụ nsonaazụ nke nsogbu na ndụ gị? Nọrọ ike. Ọ bụ ikike nkịtị ịnagide nrụgide. Taa, anyị na-akpọ ya resiliili. Ike ibiaghachi azu. Na otu n'ime àgwà kacha mma nwatakịrị ọ bụla kwesịrị ịmụta na okenye ọ bụla kwesịrị ịmụta bụ resili resili. N'ihi na mmadụ niile dara, onye ọ bụla na-asụ ngọngọ, onye obula gabigara oge ihe isi ike, mmadụ niile na-arịa ọrịa n’oge dị iche iche. Onye ọ bụla nwere ọdịda na ndụ ha. Ọ bụ otu esi ejide nrụgide. Ntachi obi, ị na-akwụsi ike ma na-asọgide. Ọ dị mma, kedu ka ị si amụta ime nke ahụ? Kedụ ka esi mụta ijikwa nrụgide? Site na ahụmịhe, nke ahụ bụ naanị ụzọ. Learn mụta ijide nrụgide na akwụkwọ ọgụgụ. Learn mụta otu esi ejikwa nrụgide na nzukọ ọmụmụ ihe. Mụta ijide nrụgide site n'ime nrụgide. Ma ị maghị ihe dị n’ime gị ruo mgbe etinyeworị gị n'ọnọdụ ahụ. N'afọ nke abụọ nke addka Saddleback, 1981, Enwere m nkụda mmụọ ebe izu ọbụla m chọrọ ị gha arụkwaghịm. Achọrọ m ịkwụsị ya n'ehihie Sọnde ọ bụla. Ma, enwere m ihe isi ike na ndụ m. ma m ga-etinye otu ụkwụ n’iru nke ọzọ dị ka Chukwu, enwetaghị m iwu nnukwu ụka, mana Chukwu, butere m n’izu a. M na-agaghị na-mbà. Obi dị m ụtọ na ike agwụghị m. Obi na-atọ m ụtọ karịa na ike agwụghị Chineke. N'ihi na nke ahụ bụ nnwale. N'afọ ahụ nke nnwale ahụ, etinyere m mmụọ na mmekọrita na mmetụta nke uche na ikike iche echiche nke ahụ nyere m ohere ka ọtụtụ afọ gachaa ịkụ bọọlụ niile ma na-ejikwa oke nrụgide na anya ọha n'ihi na agabigawo m n’afọ ahụ Site na nsogbu siri ike pụọ, otu na ibe ya. Know mara, America enweela mmekọrịta ịhụnanya na ịdị mma. Anyị hụrụ ntụsara ahụ. N’ụbọchị na n’izu n’ihu nsogbu a, ị ga-enwe ọtụtụ ihe na-agaghị ekwe mmekwata. Enweghi nsogbu. Kedu ihe anyị ga - eji aka anyị mee Mgbe ihe niile adịghị mma, mgbe ị ga-anọrịrị mgbe ọ naghị ewute gị. Know mara, ebumnuche nke triathlon ma ọ bụ ebumnuche nke marathon Ihe a abụghị ọsọ, ọsọsọ ị ga-esi rute ebe ahụ, ọ bụ ihe gbasara ntachi obi. Finish mechara ọsọ ahụ? Kedu otu ị si akwado maka ụdị ihe ahụ? Naanị site na ịgabiga ha. Yabụ mgbe ị setịpụrụ n'oge dị n'ihu, echegbula ya, echegbula ya. Nsogbu na-ewusi ntachi obi m. Nsogbu nwere nzube, ha nwere nzube. Ihe nke ato Jemes gwara anyi banyere nsogbu anyị ga-agabiga bụ na nsogbu tozuru agwa m. Ma o kwuru nke a n’amaokwu anọ nke Jekọb isi otu. Ọ na-ekwu ma, hapụ usoro ahụ gaa n'ihu rue mgbe ị gh’agwa ndi tozuru oke agwa na iguzosi ike n'ezi na enweghị ntụpọ adịghị ike. Ọ bụ na ị gaghị achọ ịnweta nke ahụ? Ọ́ gaghị amasị gị ịnụ ka ndị mmadụ na-ekwu, ị maara, nwanyị ahụ enweghị ntụpọ dị ike n'omume ya. Nwoke ahụ, Nwoke ahụ enweghị ntụpọ dị ike na agwa ya. Kedụ ka ị si nweta ụdị agwa tozuru oke? Hapụ usoro ahụ ruo mgbe ị ghọrọ ndị mmadụ, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, nke tozuru oke agwa na iguzosi ike n'ezi na enweghị ntụpọ adịghị ike. Know mara, enwere ọmụmụ ihe ama ama nke emere ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga na Russia na m na-echeta ide ihe, ọ dịkwa na mmetụta nke otu esi ebi ndụ dị iche metụtara ogologo ndụ ma ọ bụ afọ ndụ nke anụmanụ dị iche iche. Ha wee tinye ụfọdụ anụmanụ n'ime obibi ha, ha tinyere ụfọdụ anụmanụ ndị ọzọ ihe isi ike na gburugburu ebe obibi siri ike. Ndị sayensị ahụ chọpụtara na anụmanụ ndị ahụ nke edobere n’ime ntụsara ahụ na gburugburu ebe obibi dị mfe, ọnọdụ, ọnọdụ ibi ndụ ndị ahụ, esighị ike. N'ihi na ọnọdụ ndị ahụ dị nfe, ha bịara daa ike ma karie ọrịa. Na ndị ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma nwụrụ n'oge adịghị anya karịa ndị e nyere ikike ka ha nweta nsogbu nke ndụ. Nke ahụ ọ́ bụghị ihe na-akpali mmasị? Ihe n’ezie maka ụmụ anụmanụ amam n’aka banyere agwa anyị, kwa. Na Omenala Western karịsịa n'ụwa taa, anyị adịla mfe n ’ọtụtụ ụzọ. Ndụ ibi ndụ dị mma. Nzube Chineke nke mbu na ndu gi Nke a bụ ime ka ị dị ka Jizọs Kraịst n'ụdị omume. Ndikere mba nte Christ, anam n̄kpọ nte Christ, ibi ndu dika Kraist, ihu dika Kristi, idi nti nte Christ. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, ma Akwụkwọ Nsọ na-ekwu nke a ugboro ugboro, mgbe ahụ ka Chukwu ga - eduru gị n'otu ihe ahụ na Jisos gabigara itolite udi gi. I kwuru nke ọma, olee ụdị onye Jizọs bụ? Jizọs bụ ịhụnanya na ọ joyụ na udo na ndidi na obiọma, nkpuru nke Mmuo, ihe ndia nile. Oleekwa otú Chineke si ewepụta ha? Site na itinye anyi n'ọnọdụ di iche. Anyị na-amụta inwe ndidi mgbe anwa anyị ịghara ndidi. Anyị na-amụta ihunanya mgbe a na-eme ka anyị bụrụ ndị na-enweghị ịhụnanya. Anyị na-amụta ọ joyụ n'etiti iru uju. Anyị na-amụta ichere ma nwee ụdị ndidi ahụ mgbe anyị ga-eche. Anyị na-amụta obiọma mgbe a nwara anyị ịchọ naanị ọdịmma onwe anyị. N’ụbọchị na - abịa n’ihu, ọ ga na-abụ ọnwụnwa ike ị na-achọ onye na-achọ ịbanye na blọgụ, dọkpụrụ azụ, m wee sị, Anyị ga na-elekọta anyị anya. M, onwe m, na mụ, ezinụlọ m, anyị anọ ma ọ bụ anọ ma chefuo banyere onye ọ bụla ọzọ. Ma nke ahụ ga-akụda mkpụrụ obi gị. Ọ bụrụ na ị ga-ebido iche gbasara ndị ọzọ ma na-enyere ndị na-adịghị ike aka, ndị agadi na ndị nwere nsogbu preex, ọ bụrụkwa na ị ga-eme mgbali, mkpụrụ obi gị ga-eto, obi gị ga-eto, ị ga-abụ ezigbo mmadụ na njedebe nke nsogbu a karịa ka ị nọrọ na mmalite, ọ dị mma? Chineke, mgbe ị chọrọ iwulite omume gị, ọ nwere ike iji ihe abụọ. O nwere ike iji Okwu ya, eziokwu gbanwere anyị, ọ nwekwara ike iji ọnọdụ, nke siri ike karịa. Ugbu a, ọ ga-aka mma ka Chineke jiri ụzọ mbụ, Okwu ahụ. Ma anyị anaghị a listena ntị n'okwu ahụ mgbe niile. ya mere o jiri onodu di iche-iche iji lebara anyi anya. Ọ na-esikwa ike, ma ọ na-akakarị uru. Ugbu a, ị kwuru, nke ọma, dịkwa mma, Rick, enwetawo m ya, na nsogbu ndị ahụ dị mgbanwe ma ha nwere nzube, ha no ebea inwale okwukwe m, ha gha abia ụdị dị iche iche, ha anaghị abịa mgbe m chọrọ 'em. Na Chukwu nwere ike iji 'em tolite agwa m ma zuo ndu m. Yabụ kedu ihe m ga - eme? N'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ ma n'izu na ma eleghị anya ọnwa ga-abịa ka anyị na-ezute nsogbu Coronavirus ọnụ, kedu ka m ga-esi meghachi omume nye nsogbu na ndụ m? Anaghị m ekwu naanị maka nje. M na-ekwu banyere nsogbu ga-abịa n'ihi ya nke ịhapụ ọrụ ma ọ bụ ụmụaka ịnọ n'ụlọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emebi ndụ dị ka ọ na-adịbu. Kedụ ihe m ga - eme maka nsogbu nke ndụ m? Ọ dị mma, ọzọ, James akọwapụtara nke ọma, Ọ na-enyekwa anyị ụzọ atọ dị irè, azịza ha na-agbanwe agbanwe, mana ha bụ azịza ziri ezi. N’ezie, mgbe m gwara gị nke mbụ, ị na-aga, ị ga na-achọgharị m. Mana enwere nzaghachi atọ, ha niile malitere na R. Ihe izizi ọ zara bụ mgbe ịnọ n'oge ihe isi ike, rejoiceụrịa ọ .ụ. Go na-aga, ị na-egwu egwu? Nke ahụ dara ụda masochistic. Anaghị m ekwu na ị rejoiceụrị ọ overụ n'ihi nsogbu a. Soro m na obere oge a. Ọ na-ekwu na ya bụ ọ joyụ dị ọcha. Were nsogbu ndị a dịka ndị enyi. Ugbu a, ghọtahiela m. Ọ naghị ekwu na ọ bụ ihe adịgboroja. Ọ naghị ekwu na yikwasị ya ọchị ọchị, ime ka ihe di nma na odighi, n'ihi na ọ bụghị. Pollyanna, Little Orphan Annie, anwụ ọ ga-apụta echi, ọ nwere ike ọ gaghị apụta echi. Ọ naghị ekwu na ọ gọnarị eziokwu. Ọ naghị ekwu be ịbụ onye hụrụ anya. Oh nwa nwoke, a ga m ata ahụhụ. Chineke kpọrọ ụfụ asị dịka ị na-eme. Ehee, m ga-ata ahụhụ, ụdị. Ma ị nwere ebe a na-eche ịnwụ n'ihi okwukwe, yana imata, Naanị m nwere mmụọ nke mmụọ a mgbe obi adịghị m. Saa bere no, na ,sorosoroni, Onyankopɔn Ba no sɛ tosorosoroni no Ba. Chineke achọghị ka i nwee echiche ndị hụrụ mmụọ n'anya n'ihe mgbu. Know mara, echetara m otu oge m na-agabiga oge siri ezigbo ike na enyi na-achọ inwe obi ọma ha wee sị, "Rick, makwaa "n'ihi na ihe nwere ike njọ." Ma maa ihe, ha kara njọ. O nyeghị m aka ma ọlị. Enwere m obi ọerụ ma ha njọ. (chuckles) Yabụ na ọ bụghị maka echiche ziri ezi Pollyanna. Ọ bụrụ na m na-anụ ọkụ n'obi, m ga-anụ ọkụ n'obi. Ee e, mba, mba, mba, ọ karịrị, ọ dị omimi karịa nke ahụ. Anyị anaghị a rejoiceụrị ọ ,ụ, gee ntị, anyị anaghị a rejoiceụrị ọ forụ maka nsogbu ahụ. Anyị na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ na nsogbu ahụ, ebe anyị nọ na nsogbu ahụ, a ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-a rejoiceụrị ọ aboutụ. Ọbụghị nsogbu ahụ n’onwe ya, kama ihe ndị ọzọ na anyị nwere ike ị rejoiceụrị ọ aboutụ banyere nsogbu ndị ahụ. Gịnị mere anyị nwere ike iji rejoiceụrịa ọ inụ ọbụlagodi nsogbu ahụ? 'Mee ka anyị mara na enwere ebumnuche maka ya. N’ihi na anyị ma na Chineke agaghị ahapụ anyị. Maka na anyị ma ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị ma na Chineke nwere nzube. Rịba ama na o kwuru na ya dị ka ọ joyụ dị ọcha. Nọgide na-atụgharị uche n'okwu ahụ. Tulee ụzọ iji kpachara anya mezie uche gị. I nwere mmezi omume na ị ga-eme ebe a. Nhọrọ ị na-eme ị toụrị ọ ?ụ? Na Abụ Ọma 34 amaokwu nke mbụ, ọ na-ekwu Aga m agọzi Jehova oge niile. N'oge niile. Ọ si, Mu onwem g .me. Ọ bụ nhọrọ nke uche, ọ bụ mkpebi. Ọ bụ nkwa, ọ bụ nhọrọ. Ugbu a, ị ga-agabiga n'ọnwa ndị dị n'ihu ya na obu ezigbo agwa ya ma obu odi ya nma. Ọ bụrụ na omume gị dị njọ, ị ga-eme onwe gị ihe ọjọ gi na ndi nile gbara gi gburugburu. Ma ọ bụrụ na omume gị dị mma, ọ bụ nhọrọ gị ị rejoiceụrị ọ .ụ. Say sị, ka anyị leba anya n'akụkụ dị mma. Ka anyi chọta ihe anyi g’eji kelee Chukwu. Ka anyi ghota na obu ihe ojoo. Chineke p bringr bring iwep good ezi ihe site na nd bad ojoo. Ya mere mee mgbanwe omume. Agaghị m enwe obi ilu na nsogbu a. M ga-aka mma na nsogbu a. Aga m ahọrọ, ọ bụ nhọrọ m ị toụrị ọ .ụ. Ọ dị mma, nọmba abụọ, R bụ nke abụọ. Nke ahụ bụkwa rịọ Chineke maka amamihe. Nke a bụ ihe ịchọrọ ịme oge ọ bụla ị nọ na nsogbu. Ichoro Chineke ka o nye gi amamihe. Izu gara aga, ọ bụrụ na ịgere ntị n’ozi izu gara aga, ma ọ bụrụ na uche gị, laghachi na ntanetị ma lee ozi ahụ na-eme ya na ndagwurugwu nke virus na-enweghị egwu. Ọ bụ nhọrọ gị ị rejoiceụrị ọ ,ụ, mana mgbea juo Chineke amamihe. Na-arịọkwa Chineke ka o nye gị amamihe ma na-ekpekwa ekpere ị na-ekpekwa ekpere banyere nsogbu gị. Amaokwu asaa kwuru nke a na Jems otu. Ọ bụrụ n’usoro a, onye ọ bụla n'ime unu amaghị etu e si ezukọ ụdị nsogbu ọ bụla, nke a esighị na ntụgharị Phillips. Ọ bụrụ n’usoro a, onye ọ bụla n’ime unu amaghị etu e si ezute nsogbu obula gi aghaghi iju Chineke Onye n givesmere madu nile ihe ọma n’emeghị ka obi ha ju ha ikpe. Ma ị ga-ejide n’aka na amamihe dị mkpa ka agenye gi. Ha na-ekwu gịnị kpatara ihe niile m ga-eji arịọ maka amamihe n'etiti nsogbu? Yabụ imuta ya. Yabụ ị ga - amụta site na nsogbu, ya mere i jiri rịọ maka amamihe. Ọ bara uru karịa ma ọ bụrụ na ị ga-akwụsị ịjụ ihe kpatara ya, kedu ihe kpatara ihe a ji mee, ma bido jụọ, kedu ihe ichoro ka m muta? Kedu ihe ị chọrọ ka m bụrụ? Kedu ka m ga - esi na nke a? Kedụ ka m ga - esi bụrụ ezigbo nwanyị? Kedụ ka m ga - esi ghọrọ ezigbo mmadụ site na nsogbu a? Ee, ana m anwale. Agaghị m echegbu onwe m maka ihe kpatara ya. Gịnị kpatara na ọ baghịdị mkpa. Ihe dị mkpa bụ, kedu ihe m ga-aghọ, gịnịkwa ka m ga-amụta n’ọnọdụ a? Na iji mee nke ahụ, ị ​​ga-achọrọ amamihe. Ọ na-ekwu mgbe ọ bụla ịchọrọ amamihe, jụọ Chineke, Chukwu goziere gi ya. Yabụ I kwuru, Chukwu, achọrọ m amamihe dị ka mama. Kidsmụ m ga-anọ n'ụlọ maka ọnwa na-abịa. Achọrọ m amamihe dị ka nna. Kedụ ka m si eduzi mgbe ọrụ anyị nwere nsogbu na enweghị m ike ịrụ ọrụ ugbu a? Rịọ Chineke ka o nye gị amamihe. Ajula ihe kpatara ya, kama juo gini. Yabụ na mbụ ị rejoiceụrịa ọ ,ụ, ị ga-enweta ezigbo echiche Nkwupụta, aga m ekele Chineke ọ bụghị maka nsogbu ahụ, mana aga m ekele Chukwu n’ime nsogbu. N'ihi na Chineke dị mma ọbụlagodi na ndụ adịghị ndụ. Ọ bụ ya mere m ji kpọọ usoro isiokwu a "Ezi okwukwe na arụ ọrụ mgbe ndụ anaghị arụ." Mgbe ndụ anaghị arụ ọrụ. Ana m a rejoiceụrị ọ andụ, ana m arịọ. Ihe nke ato James gwara ka eme bu izu ike. Ee, ọ dị ka ọfụma pụọ, enweta onwe gị ha nile na ikpo ha. Enwela oke nrụgide na ị nweghị ike ịme ihe ọ bụla. Echegbula onwe gị banyere ọdịnihu. Chukwu kwuru na a ga m elekọta gị, tụkwasị m obi. You tụkwasịrị Chukwu obi mara ihe kachasị mma. Gị na ya na-arụkọ ọrụ. Ikpatulata ọnọdụ ị na-aga. Ma na ị sị, Chineke, a ga m zuru ike. Anaghị m enwe obi abụọ. Anaghị m enwe obi abụọ. Aga m atụkwasị gị obi n'ọnọdụ a. Amaokwu nke asatọ bụ amaokwu ikpeazụ anyị ga-eleba anya. Ọ dị mma, anyị ga-elele otu ọzọ na nkeji. Mana amaokwu nke asatọ kwuru, mana ị ga-ajụrịrị na ezigbo okwukwe na-enweghị obi abụọ nzuzo. Kedu ihe ị na-arịọ maka ezi okwukwe? Rịọ maka amamihe. Ma kwue, Chineke, a chọrọ m amamihe, ana m ekelekwa gị ị ga-enye m amamihe. Ekele m gị, ị na-enye m amamihe. Emekpala obi, obi abụọ, kama weputara ya Chineke. Know mara, Akwụkwọ Nsọ kwuru na mbido mgbe m mere ka ọ pụta ìhè na o kwuru ọtụtụ ụdị nsogbu a. Know mara, anyị na-ekwu maka ha hiri nne, ọtụtụ, ọtụtụ nsogbu. Okwu ahụ n'asụsụ Grik, ọtụtụ ụdị nsogbu, bụ otu okwu ahụ kpuchiri na mbụ na Peter isi nke anọ, amaokwu nke anọ kwuru Chineke nwere ọtụtụ amara inye gị. Ọtụtụ amara nke Chukwu. Ọ bụ otu multicolored, multifeatured, dị ka diamond. Gịnị ka ọ na-ekwu ebe ahụ? Maka nsogbu niile ị nwere, amara dị n’aka Chukwu nke dị. Maka ụdị ọnwụnwa na mkpagbu niile ma ihe isi ike, enwere ụdị amara na obi ebere ye odudu emi Abasi oyomde ndinọ fi iji gboo nsogbu ahụ. Ichọrọ amara maka nke a, ịchọrọ amara maka nke a, ịchọrọ amara maka nke a. Chineke na-ekwu na amara m dị ka multifeatured dika nsogbu ndi n’acho ihu. Gịnịzi ka m na-ekwu? Ana m ekwu na nsogbu niile dị na ndụ gị, gụnyere nsogbu COVID a, ekwensu putara imeri gi na nsogbu ndi a. Ma Chineke pụtara imebe gị site na nsogbu ndị a. Ọ chọrọ iji merie gị, Setan, mana Chineke chọrọ imepe gị. Ugbu a, nsogbu ndị batara na ndụ gị emela onwe gị ka ị bụrụ ezigbo mmadụ. Otutu ndi mmadu ghuru ndi mmadu obi ilu site na 'em. Ọ naghị eme gị ezigbo mmadụ ọzọ. Ọ bụ omume gị na-eme ka ihe dị iche. Ọ bụ ebe ahụ ka m chọrọ inye gị ihe ọzọ ị ga-echeta. Nọmba anọ, ihe nke anọ ị ga-echeta mgbe ị na-enwe nsogbu bụ icheta nkwa nke Chineke. Cheta nkwa nke Chineke. Nke a bụ amaokwu nke iri na abụọ. Ka m gụpụtara gị nkwa a. Jems isi otu, amaokwu nke iri na abụọ. Ngọzi na-adịrị onye na-anọgidesi ọnwụnwa ike, n'ihi na mgbe o guzoro ule, ọ ga-enweta okpueze nke ndụ Chineke kwere nkwa, Okwu ahụ dịịrị ndị hụrụ ya n'anya. Ka m gụghachi ya. Achọrọ m ka ị gee ya ntị nke ọma. Ngọzi na-adịrị onye na-anọgidesi ọnwụnwa ike, Onye na-edozi ihe isi ike, dị ka ọnọdụ anyị ugbu a. Onye agọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-atachi obi bụ onye na-anọgidesi ike, Onye tukwasiri Chineke obi, Onye na-ekwenye ekwenye n'okpuru onwunwa, n’ihi na mgbe ọ kwụsịrị ịnwale ule ahụ, na-apụta na azụ, ikpe a agaghị agwụ. Enwere njedebe ya. Ga-apụta na nsọtụ ọzọ nke okporo mmiri ahụ. You ga-enweta okpueze nke ndụ. Ọ dị mma, amataghị m ihe nke ahụ pụtara, mana ọ dị mma. Oyiyi ndu nke Chineke kwere nkwa Maka ndị hụrụ ya n'anya. Ọ bụ nhọrọ gị ị rejoiceụrị ọ .ụ. Ọ bụ nhọrọ gị ịtụkwasị obi na amamihe nke Chukwu kama inwe obi abụọ. Rịọ Chineke ka o nye gị amamihe ga-enyere gị aka n'ọnọdụ gị. Ma juo Chineke ka o nwee okwukwe iji tachie obi. Ma kwue, Chineke, ike agaghị agwụ m. Nke a ga-agabiga. A jụọ mmadụ onye, ​​kedu nke kacha amasị gị amaokwu nke Akwụkwọ Nsọ? Kwuru, o mezuru. Yabụ kedu ihe masịrị amaokwu ahụ. Maka na mgbe nsogbu bịara, amaara m na ha abịaghị ịnọ. Ha mere. (chuckles) Ma nke ahụ bụ eziokwu na ọnọdụ a. Ọ bụghị ịbịa ka ọ nọrọ, ọ na-abịa. Ugbu a, achọrọ m imechi echiche a. Ọgba aghara abụghị naanị ikewa nsogbu. Ọ na-ekpughere ha mgbe mgbe, ọ na-ekpughere ha mgbe mgbe. Ọgba a nwere ike kpughere ụfọdụ ọgbaghara na alụmdi na nwunye gị. Ọgba aghara a nwere ike ikpughe ụfọdụ mgbawa na mmekọrịta gị na Chineke. Nsogbu a nwere ike ikpughe ụfọdụ mgbawa na ụzọ ibi ndụ gị, na ị na-eme ka onwe gị sie ike. Gbalịanụ kwe ka Chineke gwa gị okwu banyere ihe chọrọ ịgbanwe na ndụ gị, ọ dị mma? Achọrọ m ka ị chee maka izu a, ma ka m nye gị ụfọdụ usoro dị mma, ọ dị mma? Nzọụkwụ bara uru, nke mbụ, achọrọ m gị iji gbaa onye ozo ume listena nti na ozi a. Yoù ga-eme nke ahụ? You ga - agbanye njikọ a ma zigara ya enyi? Ọ bụrụ na nke a gbara gị ume, nyefee ya, bụrụ onye nkuzi n’izu a. Onye ọ bụla nọ gị nso chọrọ agbamume n’oge nsogbu a. Ya mere ziga ‘em njikọ. Izu uka abuo gara aga mgbe anyi nwere ulo uka n’ogbe ndi a na Lake Forest na ogige anyị niile nke Saddleback, ihe dị ka puku mmadụ iri atọ bịara ụka. Mana izu a gara aga mgbe anyị kwesịrị ịkagbu ọrụ m niile lere anya na ntanetị, m kwuru, mmadu obula gakwuru ndi nke obere ma kporo ndi agbata obi gi kpọọ ndị enyi gị ka ha soro gị obere, anyị dị 181,000 ISPs nke ụlọ anyị ejikọtara aka na ọrụ ahụ. Nke ahụ putara na o nwere ike ịbụ ọkara nde mmadụ kiriri ozi izu gara aga. Oru nde mmadu ma obu karie. Maka gịnị, maka na ị gwara onye ọzọ ka ọ lelee. Achọrọ m ịgba gị ume ka ị bụrụ onye akaebe nke ozi ọma izu a n’ụwa nke ozi ọma na-achọsi ike. Ọ dị ndị mmadụ mkpa ịnụ nke a. Zipu njikọ. Ekwere m na anyị nwere ike ịgba otu nde mmadụ izu a ọ bụrụ na anyị niile ga-agafe na ozi, ọ dị mma? Nke abuo, ma oburu na ino n’ulo pere mpe, anyi adighi agba egwu nwee ike izute, opekata mpe ọnwa a, nke ahụ bụ n'aka. Yabụ na aga m agba gị ume ịhazi nzukọ mebere. Nwere ike ịnwe otu ịntanetị. Kedu ka ị si eme nke ahụ? Ọ dị mma, enwere ngwaahịa dị ka Zoom. Want chọrọ inyocha nke ahụ, Zoo, ọ bụ n'efu. You nwere ike ịga ebe ahụ gwa mmadụ niile ka ha bia Na ekwentị ma ọ bụ na kọmputa ha, you nwere ike ijikọ mmadụ isii ma ọ bụ asatọ ma ọ bụ mmadụ iri, ị nwekwara ike ịnwe otu gị n'izu a na Zoom. You nwere ike ihu ihu ibe, dịka Facebook Live, ma ọ bụ dị ka ụfọdụ ndị ọzọ, ị maara, ihe dị na iPhone mgbe ịlele FaceTime. Ọ dị mma, ịnweghị ike iji otu buru ibu mee nke ahụ mana inwere ike iji otu mmadu mee ya. Ma n’uzi n’otu n’otu n’otu n’iru na ihu na teknụzụ. Anyị nwere teknụzụ enweghị nke ugbu a. Yabụ lelee Zoom maka obere igwe mebere otu. Ma ebe a n'ịntanetị ị nwekwara ike ịnweta ụfọdụ ozi, kwa. Nọmba atọ, ọ bụrụ na ịnọghị na obere ìgwè, Aga m enyere gị aka ịbanye n’otu ịntanetị n’izu a, aga m. Ihe ichoro ime bu bu email m, PastorRick@saddleback.com. PastorRick @ saddleback, otu okwu, SADDLEBACK, saddleback.com, m ga-ejikọ gị ka ndị otu ntanetị, ọ dị mma? Gbalịa hụ na ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke Saddleback Church gụọ akwụkwọ akụkọ gị kwa ụbọchị nke m na-eziga ụbọchị niile n’oge nsogbu a. A na-akpọ ya "Saddleback na Home." Ọ nwere ndụmọdụ, ọ nwere ozi na-agba ume, a natala ozi ị nwere ike iji. Ezigbo ihe. Anyị chọrọ ka gị na gị na-emekọ kwa ụbọchị. Nweta "Saddleback n'ụlọ." Ọ bụrụ na enweghị m adreesị ozi-e gị, mgbe ahụ ị naghị enweta ya. Ma ị nwere ike izitere m email address gị na PastorRick@saddleback.com, aga m etinye gị na listi, ị ga-enweta njikọta ụbọchị, akwụkwọ akụkọ "Saddleback in the Home" kwa ụbọchị. Achọrọ m ikpechi tupu m na-ekpe ekpere site n'ikwu ọzọ, ahụrụ m gị n'anya. Ekpesiri m gị ekpere kwa ụbọchị, ana m agakwa n’ihu maka gị. Anyị ga-enweta nke a. Nke a abụghị njedebe nke akụkọ ahụ. Chineke ka nocheche ya, ma Chineke gha akpo ihe a ime ka okwukwe gị too, ime ka ndi mmadu nwe okwukwe. Onye ma ihe gha eme. Anyị nwere ike inwe revival nke mmụọ site n'ihe ndị a niile n’ihi na ndị mmadụ na-echigharịkwuru Chineke mgbe niile mgbe ha gabigara oge ihe isi ike. Ka m kpee ekpere maka gị. Nna, achoro m ikele m ndi mmadu Onye na-ege ntị ugbu a. Ka anyị bie ndụ nke James isi otu, amaokwu isii mbụ ma ọ bụ asaa. Ka anyị mụta na nsogbu bịara, ha na-eme, ha agbanwe agbanwe, ha nwere nzube, na ọ bụrụ na ị ga jiri ha mee ihe ọma na ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-atụkwasị gị obi. Nyere anyị aka ịghara inwe obi abụọ. Nyere anyị aka ị rejoiceụrị ọ toụ, ịrịọ, Onyenwe anyị, na icheta nkwa gi. M na-ekpekwa ekpere maka mmadụ niile ka ha nwee izu ike. N’aha Jizọs, amen. Chukwu gozie gi, onye obula. Nyefee ya na onye ọzọ.
&quot;Okwukwe nke na-edozi esemokwu&quot; na pastọ Rick Warren
< start="1.34" dur="1.42"> - Ndewo, onye obula, abu m Rick Warren, >
< start="2.76" dur="1.6"> pastọ na Saddleback Church na ode akwụkwọ >
< start="4.36" dur="2.58"> nke “Nzube Obi Ndụ” na ọkà okwu >
< start="6.94" dur="2.71"> na mmemme “Daily Hope”. >
< start="9.65" dur="2.53"> Daalụ maka itinye aka na mgbasa ozi a. >
< start="12.18" dur="3.59"> Know mara, n'izu a na Orange County, California, >
< start="15.77" dur="2.47"> gọọmentị kwupụtara na ha na-amachibido iwu >
< start="18.24" dur="4.19"> nzukọ niile n'ụdị ọ bụla, nke ọ bụla >
< start="22.43" dur="1.46"> rue ngwụcha ọnwa. >
< start="23.89" dur="2.81"> N’ihi ya, nabata Saddleback Church n’ụlọ. >
< start="26.7" dur="1.41"> Obi dị m ụtọ na ị nọ ebe a. >
< start="28.11" dur="5"> Ana m eji vidiyo na-ezi gị ihe >
< start="33.31" dur="4.59"> n'etiti ugbu a na mgbe ọ bụla nsogbu COVID-19 na-akwụsị. >
< start="37.9" dur="2.12"> N’ihi ya, nabata Saddleback Church n’ụlọ. >
< start="40.02" dur="3.34"> Achọrọ m ịkpọ gị ka ị soro m kwa izu, >
< start="43.36" dur="2.25"> bụrụ akụkụ nke ofufe a niile. >
< start="45.61" dur="2.91"> Anyi g’eme egwu ma fee ofufe, >
< start="48.52" dur="2.44"> m ga na-ezikwa okwu n’Okwu Chineke. >
< start="50.96" dur="3.01"> Ma, dịka m chere maka nke a, >
< start="53.97" dur="2.15"> Site n'ụzọ, aga m ebu ụzọ gwa gị. >
< start="56.12" dur="3.84"> Echere m na ha ga-ewepụrịrị anyị nzukọ. >
< start="59.96" dur="3.6"> Ma otu izu a, enwere m Saddleback studio >
< start="63.56" dur="1.32"> kwagara mgbo. >
< start="64.88" dur="2.34"> M na-akụ ihe a na ụgbọala m. >
< start="67.22" dur="2.46"> Ndị ọrụ aka ọkpụkpụ m. >
< start="69.68" dur="1.979"> Batanụ banye, ụmụ nwoke, kwuo nụ mmadụ niile. >
< start="71.659" dur="2.101"> (ịchị ọchị) >
< start="73.76" dur="3.12"> Ha nyere aka ibughari ya ebe a ma dozie ya >
< start="76.88" dur="4.74"> ka anyị wee nwee ike ịgwa gị okwu kwa izu. >
< start="81.62" dur="3.32"> Ugbu a, dịka m chere banyere ihe anyị kwesịrị ikpuchi >
< start="84.94" dur="3.22"> n'oge nsogbu COVID-19, >
< start="88.16" dur="2.98"> Echere m ozugbo banyere akwụkwọ James. >
< start="91.14" dur="2.67"> Akwụkwọ James bụ obere akwụkwọ >
< start="93.81" dur="2.15"> na nso ogwugwu nke agba ohu. >
< start="95.96" dur="3.81"> Ma ọ bara uru ma ọ na-enye aka, >
< start="99.77" dur="5"> ana m akpọkwa akwụkwọ a okwukwe nke na-arụ ọrụ mgbe ndụ adịghị. >
< start="105.56" dur="3.67"> Echere m ma ọ bụrụ na achọrọ ihe ọ bụla ugbu a, >
< start="109.23" dur="4.75"> okwukwe dị anyị mkpa ma ọ bụrụ na ndụ adịghị. >
< start="113.98" dur="2.86"> N'ihi na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma ugbu a. >
< start="116.84" dur="2.75"> Yabụ taa, n'izu a, anyị ga amalite >
< start="119.59" dur="3.25"> njem na -aga gị ga-agba gị ume >
< start="122.84" dur="1.03"> site na nsogbu a. >
< start="123.87" dur="3.22"> Achọghịkwa m ka ị hapụ ozi nke ọ bụla. >
< start="127.09" dur="4.1"> N'ihi na akwụkwọ Jems kwuru n'ezie ihe iri na anọ dị mkpa >
< start="131.19" dur="4.34"> ihe mgbochi ndu, ndu ndu 14, >
< start="135.53" dur="3.76"> 14 ebe n’otu n’otu n’otu >
< start="139.29" dur="1.91"> already nweela nsogbu na ndụ gị, >
< start="141.2" dur="3.17"> ị ga-esokwa emekọrịta ihe n’ọdịnihu. >
< start="144.37" dur="3.52"> Dịka ọmụmaatụ, na isi nke James, >
< start="147.89" dur="1.6"> ka m nye gi obere nnyocha banyere akwukwo a. >
< start="149.49" dur="1.42"> Ọ bụ naanị isi anọ. >
< start="150.91" dur="2.99"> Isi nke mbụ, ọ na-ebu ụzọ kwuo banyere ihe isi ike. >
< start="153.9" dur="1.77"> Anyị ga na-ekwu maka nke ahụ taa. >
< start="155.67" dur="4.13"> Gini bu uche Chukwu maka nsogbu gi? >
< start="159.8" dur="1.6"> Ọ na-ekwukwa banyere nhọrọ. >
< start="161.4" dur="1.62"> Kedu ka esi eme uche gị? >
< start="163.02" dur="2.085"> Kedụ ka isiri mara mgbe ị ga-anọ, oge ị ga-aga? >
< start="165.105" dur="2.335"> Kedu ka ị si eme, ị na-eme mkpebi? >
< start="167.44" dur="2.41"> Ma ọ na ekwu maka ọnwụnwa. >
< start="169.85" dur="3.29"> Anyị ga-elele otu i si merie ọnwụnwa niile >
< start="173.14" dur="3.24"> na ndu gi nke dika odi ka oghara ime ka gi ghara imebi. >
< start="176.38" dur="2.04"> Ma ọ na-ekwu banyere nduzi. >
< start="178.42" dur="2.68"> Ọ na-ekwu maka etu Akwụkwọ Nsọ ga-esi gọzie anyị. >
< start="181.1" dur="2.24"> Ọbụghị naanị gụọ ya, kama ka ọ gọzie gị. >
< start="183.34" dur="1.56"> Nke ahụ bụ na isi nke mbụ. >
< start="184.9" dur="2.36"> Anyị ga-eleba anya na ndị ahụ n'izu ndị na-abịa. >
< start="187.26" dur="2.7"> Isi nke abụọ kwuru banyere mmekọrịta. >
< start="189.96" dur="3.06"> Anyị ga-eleba anya n’otú i si emeso ndị mmadụ ihe. >
< start="193.02" dur="2.628"> Gị na ndị mmadụ ga-anọ n'ụlọ, >
< start="195.648" dur="4.242"> n'ime ezinụlọ niile, ụmụaka na nne na nna. >
< start="199.89" dur="2.32"> ndị mmadụ na-enwekwa ike ịna-emegwara ndị ọzọ. >
< start="202.21" dur="2.74"> Nke ahụ ga-abụ ozi dị mkpa na mmekọrịta. >
< start="204.95" dur="1.39"> Mgbe ahụ ọ na-ekwu banyere okwukwe. >
< start="206.34" dur="4.76"> Kedu otu ị ga - esi tụkwasị Chineke obi mgbe ọ naghị adị gị otú ahụ >
< start="211.1" dur="2.18"> ma mgbe ihe na-aga n'ụzọ adịghị mma? >
< start="213.28" dur="1.64"> Nke ahụ bụ na isi nke abụọ. >
< start="214.92" dur="3.32"> Isi nke atọ, anyị ga-ekwu maka mkparịta ụka. >
< start="218.24" dur="1.66"> Ike nke mkparịta ụka. >
< start="219.9" dur="2.12"> Ma na nke a bụ otu n’ime amaokwu kachasị mkpa >
< start="222.02" dur="3.73"> N’ime Akwụkwọ Nsọ gbasara otu esi ejikwa ọnụ gị. >
< start="225.75" dur="2.25"> Nke ahụ dị mkpa ma anyị nọ na nsogbu ma ọ bụ na anyị abịaghị. >
< start="228" dur="2.27"> Ma ọ na-ekwu banyere ọbụbụenyi. >
< start="230.27" dur="2.21"> Ọ na-enyekwa anyị ozi bara uru >
< start="232.48" dur="2.71"> kedu ka ị ga-esi nwee ezi ndị enyi >
< start="235.19" dur="2.7"> ma zere ọbụbụenyi na-amaghị ihe. >
< start="237.89" dur="2.24"> Nke ahụ bụ isi atọ. >
< start="240.13" dur="3.5"> Isi nke anọ dị na esemokwu. >
< start="243.63" dur="2.39"> Na isi nke anọ, anyị na-ekwu maka ya >
< start="246.02" dur="1.88"> kedu ka ị ga - esi ezere arụmụka. >
< start="247.9" dur="1.56"> Nke ahụ ga - enyere gị aka n'ezie. >
< start="249.46" dur="2.78"> Ka esemokwu ebilite na nkụda mmụọ, >
< start="252.24" dur="2.94"> ka ndị mmadụ n’enweghị ọrụ, olee otu ị ga - esi zere arụmụka? >
< start="255.18" dur="2.03"> Mgbe ahụ ọ na-ekwu banyere ikpe ndị ọzọ ikpe. >
< start="257.21" dur="2.74"> Kedu ka ị ga-esi kwụsị ịkpọ Chineke? >
< start="259.95" dur="1.84"> Nke ahụ ga-eweta ọtụtụ udo na ndụ anyị >
< start="261.79" dur="1.08"> ọ bụrụ na anyị nwere ike ime nke ahụ. >
< start="262.87" dur="1.67"> Mgbe ahụ ọ na-ekwu maka ọdịnihu. >
< start="264.54" dur="1.82"> Kedụ ka ị si akwado maka ọdịnihu? >
< start="266.36" dur="1.56"> Nke a bụ isi nke anọ. >
< start="267.92" dur="2.75"> Ugbu a, na isi nke ikpeazụ, isi nke ise, agwara m gị >
< start="270.67" dur="0.98"> enwere isiakwụkwọ anọ, enwere n'ezie >
< start="271.65" dur="1.683"> isi ise na Jemes. >
< start="274.327" dur="2.243"> Anyi na ekwu maka ego. >
< start="276.57" dur="3.65"> Ọ na-ekwukwa banyere etu ị ga-esi jiri akụ na ụba gị mara ihe. >
< start="280.22" dur="1.73"> Anyi na ewee lee ntachi obi. >
< start="281.95" dur="3.26"> Gịnị ka ị na-eme mgbe ichere Chineke? >
< start="285.21" dur="1.92"> Thelọ kachasị sie ike ịnọ ọdụ >
< start="287.13" dur="3.87"> di n’ime ulo nchere ihe ma ino ososo na nke Chineke. >
< start="291" dur="1.29"> Anyi na-ele anya n’ekpere, >
< start="292.29" dur="2.07"> nke bu ozi ikpe azu anyi ga elele. >
< start="294.36" dur="1.94"> Olee otu i si ekpe ekpere maka nsogbu gi? >
< start="296.3" dur="2.58"> Akwụkwọ Nsọ sị na enwere ụzọ isi kpee ekpere ma nweta azịza, >
< start="298.88" dur="2.29"> ma enwere ụzọ isi kpee ekpere. >
< start="301.17" dur="1.27"> Anyị ga na-elekwa nke ahụ anya. >
< start="302.44" dur="3.763"> Ugbu a taa, anyị ga na-ele anya na amaokwu isii mbụ >
< start="306.203" dur="2.072"> nke akwụkwọ Jems. >
< start="308.275" dur="5"> Ọ bụrụ na ịnweghị Bible, m chọrọ ka ị budata >
< start="313.46" dur="3.73"> ndepụta nke weebụsaịtị a, akwụkwọ nkuzi, >
< start="317.19" dur="2.02"> n’ihi na amaokwu niile anyị ga-eleba anya >
< start="319.21" dur="2.04"> d ị n'ihe ndepụta gị. >
< start="321.25" dur="3.22"> Jemes isi nke mbụ, amaokwu isii nke mbụ. >
< start="324.47" dur="4.07"> Na Bible na-ekwu nke a mgbe ọ na-ekwu okwu banyere >
< start="328.54" dur="2.33"> ibuputa nsogbu gi. >
< start="330.87" dur="2.35"> Nke mbu, Jemes 1: 1 kwuru nke a. >
< start="333.22" dur="5"> Jemes, orù nke Chineke na Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, >
< start="338.86" dur="4.18"> ebo iri na abụọ ahụ gbasasịrị n’etiti mba nile, ekele. >
< start="343.04" dur="2.23"> Ugbu a, ka m kwụsịtụ ebe a otu nkeji wee kwuo >
< start="345.27" dur="2.95"> nke a bu iwebata n’uche >
< start="348.22" dur="1.71"> nke akwukwo obula na akwukwo nso. >
< start="349.93" dur="2.01"> Maka na ị maara onye James bụ? >
< start="351.94" dur="3.073"> Ọ bụ nwa nwoke nke Jizọs. >
< start="355.013" dur="1.507"> Kedu ihe ị pụtara site na nke ahụ? >
< start="356.52" dur="2.19"> Ọ pụtara na ọ bụ Meri na nwa Josef. >
< start="358.71" dur="2.899"> Jizọs bụ naanị nwa Meri. >
< start="361.609" dur="4.591"> Ọ bụghị nwa Josef n'ihi na Chineke bụ nna Jizọs. >
< start="366.2" dur="2.47"> Ma Akwụkwọ Nsọ gwara anyị na Meri na Josef >
< start="368.67" dur="3.52"> mụrụ ọtụtụ ụmụ mgbe oge na-aga, ma na - enyekwa anyị aha ha. >
< start="372.19" dur="2.87"> James abụghị Onye Kraịst. >
< start="375.06" dur="2.27"> Ọ bụghị onye na-eso ụzọ Kraịst. >
< start="377.33" dur="3.54"> O kwenyeghi na nwanne nne ya nwoke bụ Mesaya ahụ >
< start="380.87" dur="1.78"> n'oge ije ozi Jizọs niile. >
< start="382.65" dur="1.29"> Ọ bụ onye obi abụọ. >
< start="383.94" dur="3.14"> Ma ị ga-eche na nke ahụ, nwanne nwoke nke okenye ekweghị >
< start="387.08" dur="3.22"> na nwanne nwoke nke okenye, nke ahụ ga-abụ ihe doro anya. >
< start="390.3" dur="3.81"> Nso ikanam James enịm ke Jesus Christ? >
< start="394.11" dur="1.56"> Mbilite n’ọnwụ. >
< start="395.67" dur="4.42"> Mgbe Jizọs si n'ọnwụ bilitere ma na-eje ije >
< start="400.09" dur="1.96"> Jekob we hu ya, ọgu ubọchi abua. >
< start="402.05" dur="3.79"> ọ ghọrọ onye kwere ekwe ma mesịa bụrụ onye ndu >
< start="405.84" dur="2.09"> na Nzukọ nke Jerusalem. >
< start="407.93" dur="3.82"> Yabụ ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ikike ịtụfu aha, ọ bụ dimkpa a. >
< start="411.75" dur="4.06"> Ọ nwere ike ikwu, James, bụ nwoke ahụ toro Jizọs. >
< start="415.81" dur="2.95"> Jemes, nwanne nwoke nke Jizọs. >
< start="418.76" dur="3.87"> James, ezigbo enyi Jizọs toro. >
< start="422.63" dur="1.47"> Thosedị ihe ndị ahụ, mana ọ naghị. >
< start="424.1" dur="2.68"> Naanị ihe ọ na-ekwu bụ Jems, ohu Chineke. >
< start="426.78" dur="4.97"> Ọ dịghị adọtị ọkwa, ọ naghị akwalite ọganịhu ya. >
< start="431.75" dur="2.24"> Ma mgbe ahụ n'amaokwu nke abụọ, ọ na-amalite ịbanye >
< start="433.99" dur="5"> mbipụta a nke mbụ banyere nzube Chineke na nsogbu gị. >
< start="439.07" dur="1.86"> Ka m gụpụtara gị ya. >
< start="440.93" dur="2.41"> O kwuru, mgbe ụdị ọnwụnwa niile >
< start="444.2" dur="5"> juputa na ndu gi, ewesola ha iwe dika ihe ojoo, >
< start="449.52" dur="3.15"> kama nabata ha dika ndi enyi. >
< start="452.67" dur="2.82"> Ghọta na ha bịara ile okwukwe gị, >
< start="455.49" dur="4.8"> na imepụta njiri ntachi obi n’ime gị. >
< start="460.29" dur="4.32"> Mana ka usoro ahụ gaa n'ihu ruo ntachi obi ahụ >
< start="464.61" dur="5"> tozuola ogo, i gha abu mmadu >
< start="470.01" dur="5"> nke ntozu oke na iguzosi ike n'ezi ihe >
< start="475.11" dur="2.71"> na-enweghị ntụpọ na-adịghị ike. >
< start="477.82" dur="2.24"> Nke ahụ bụ nsụgharị Phillips >
< start="480.06" dur="2.73"> nke James isi otu, amaokwu abụọ ruo isii. >
< start="482.79" dur="3.377"> Ugbu a, ọ na - ekwu mgbe ụdị ọnwụnwa niile batara na ndụ gị >
< start="486.167" dur="2.963"> ma ha rabara gi ndu, O kwuru, ewela iwe >
< start="489.13" dur="1.69"> ka ndi n’ekwe nti, nabata ha dika enyi. >
< start="490.82" dur="2.57"> Ọ sị, ị nwee nsogbu, nwee ọ happyụ. >
< start="493.39" dur="2.09"> I nwere nsogbu, rejoiceụrịa ọ .ụ. >
< start="495.48" dur="1.807"> Problems nwere nsogbu, mụmụọ ọnụ ọchị. >
< start="499.51" dur="0.87"> Ugbu a, ama m ihe ị na-eche. >
< start="500.38" dur="1.94"> Go na-aga, ị na-egwu m? >
< start="502.32" dur="3.15"> Kedu ihe m ga - eji nwee obi ụtọ gbasara COVID-19? >
< start="505.47" dur="5"> Gini mere m ji nabata ule ndi a na ndu m? >
< start="510.6" dur="2.31"> Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? >
< start="512.91" dur="3.74"> Igodo nke omume a niile >
< start="516.65" dur="2.85"> àgwà ziri ezi n'etiti nsogbu >
< start="519.5" dur="3.65"> bụ okwu ghọta, ọ bụ okwu ghọta. >
< start="523.15" dur="2.19"> O kwuru, mgbe ụdị ọnwụnwa a niile >
< start="525.34" dur="2.99"> juputa na ndu gi, ewesola ha iwe dika ihe ojoo, >
< start="528.33" dur="4.89"> kama nabata ha dika ndi enyi, wee ghọta, jupụta >
< start="533.22" dur="3.75"> Ha na-abịa nwalee okwukwe gị. >
< start="536.97" dur="3.839"> Mgbe ahụ ọ gara n’ihu, ihe ọ na-amịpụta na ndụ ha. >
< start="540.809" dur="5"> Ihe ọ na-ekwu ebe a bụ na ọganiihu gị n’iru gị >
< start="545.99" dur="4.44"> izu ndị ga-abịa n’ihu ajọ ọrịa a COVID-19 >
< start="550.43" dur="2.87"> nke ahụ bụ ugbu a gburugburu ụwa, yana karia >
< start="553.3" dur="3.11"> Mba dị iche iche na-emechi emechi emechikwa emechi >
< start="556.41" dur="2.31"> ụlọ nri na ha na-emechi ụlọ ahịa, >
< start="558.72" dur="1.89"> ha na-emechi ụlọ akwụkwọ, >
< start="560.61" dur="1.57"> ha na-emechi ụlọ ụka dị iche iche, >
< start="562.18" dur="1.69"> ha n shutmechi ebe ọ bula >
< start="563.87" dur="3.86"> ebe ndị mmadụ na-ezukọ, dịkwa ka ebe a na Orange County, >
< start="567.73" dur="4.29"> ebe enyeghi anyi ohere isoro onye obula mee onwa a. >
< start="572.02" dur="3.75"> Ọ na-ekwu, ihe ịga nke ọma gị n’ịhụ nsogbu ndị a >
< start="575.77" dur="3.49"> A ga-eji nghọta gị kpebie ya. >
< start="579.26" dur="1.3"> Site na nghọta gị. >
< start="580.56" dur="3.24"> Sitekwa na omume gị n'ebe nsogbu ndị ahụ dị. >
< start="583.8" dur="3.69"> Ọ bụ ihe ị ghọtara, ọ bụ ihe ị ma. >
< start="587.49" dur="3.79"> Ugbu a, ihe mbụ na akụkụ Akwụkwọ Nsọ Achọrọ m ka ị ghọta >
< start="591.28" dur="3.957"> bụ na Chineke nyere anyị ihe ncheta anọ gbasara nsogbu. >
< start="595.237" dur="2.253"> I nwere ike chọọ dee ihe ndị a. >
< start="597.49" dur="2.07"> Ihe ncheta anọ gbasara nsogbu na ndụ gị, >
< start="599.56" dur="2.35"> nke gụnyere nsogbu anyị na-enwe ugbu a. >
< start="601.91" dur="5"> Nke mbụ, ọ buru ụzọ kwuo, nsogbu agaghị adịrịrị. >
< start="607.42" dur="2.34"> Nsogbu bụ ihe a na-apụghị izere ezere. >
< start="609.76" dur="1.04"> Ugbu a, olee otu o si na-ekwu nke a? >
< start="610.8" dur="4.33"> Ọ na - ekwu, mgbe ụdị ọnwụnwa niile bịara. >
< start="615.13" dur="4.41"> Ọ naghị ekwu ma ụdị ọnwụnwa niile bịa, ọ na-ekwu mgbe. >
< start="619.54" dur="1.72"> You nwere ike ịtụkwasị ya obi. >
< start="621.26" dur="3.27"> Nke a abụghị igwe ebe ihe niile zuru oke. >
< start="624.53" dur="2.66"> Nke a bụ wherewa ebe ihe niile mebiri emebi. >
< start="627.19" dur="2.05"> Ọ na-asịkwa na ị ga-enwe nsogbu, >
< start="629.24" dur="3.44"> ị ga-enwe nsogbu, ị nwere ike ịtụkwasị ya obi, >
< start="632.68" dur="2.37"> ị nwere ike ịzụta ngwaahịa na ya. >
< start="635.05" dur="2.99"> Ugbu a, nke a abụghị ihe James na-ekwu naanị. >
< start="638.04" dur="1.62"> N'ime akwụkwọ nsọ, o kwuru ya. >
< start="639.66" dur="2.77"> Jizọs kwuru n ’ụwa ị ga-enwe ọnwụnwa >
< start="642.43" dur="3.68"> na ọnwụnwa, ị ga-enwe mkpagbu. >
< start="646.11" dur="2.29"> O kwuru na ị ga-enwe nsogbu na ndụ. >
< start="648.4" dur="3.07"> Yabụ kedu ihe mere eji eju anyị mgbe anyị nwere nsogbu? >
< start="651.47" dur="1.632"> Peter wee sị ya atụla gị n'anya >
< start="653.102" dur="2.558"> mgbe ị na -agabiga ọnwụnwa dị egwu. >
< start="655.66" dur="1.786"> Kwuru na-eme adịghị ka ọ bụ ihe ọhụrụ. >
< start="657.446" dur="2.744"> Onye ọ bụla na-enwe oge ihe isi ike. >
< start="660.19" dur="2.04"> Ndụ siri ike. >
< start="662.23" dur="2.53"> Nke a abụghị igwe, nke a bụ .wa. >
< start="664.76" dur="3.18"> Onweghi onye oria, enweghi onye obula, >
< start="667.94" dur="2.94"> ọnweghị onye ọ bụla mkpuchi, enweghị onye ọpụpụ. >
< start="670.88" dur="1.73"> Ọ na-ekwu na ị ga-enwe nsogbu >
< start="672.61" dur="2.78"> n'ihi na ha adighi agha agha. >
< start="675.39" dur="3.84"> Know mara, echetara m otu oge mgbe m nọ na kọleji. >
< start="679.23" dur="2.27"> Ọtụtụ afọ gara aga, aga m agabiga >
< start="681.5" dur="1.71"> ụfọdụ siri ike n'oge. >
< start="683.21" dur="3.09"> Amalitere m ikpe ekpere, m kwuru, "Chineke, nye m ndidi." >
< start="686.3" dur="2.91"> Utu ke mme idomo oro ọyọkọri, mmọ ẹma ẹkan. >
< start="689.21" dur="2.22"> M wee sị, "Chineke, ọ dị m mkpa inwe ndidi," >
< start="691.43" dur="1.72"> Nsogbu ahụ bịara ka njọ. >
< start="693.15" dur="2.43"> M wee sị, "Chineke, ọ dị m mkpa inwe ndidi," >
< start="695.58" dur="2.93"> Ha kara njọ. >
< start="698.51" dur="1.77"> Gịnị na-eme? >
< start="700.28" dur="1.82"> N’ikpeazụ, achọpụtara m na mgbe ihe dị ka ọnwa isii gachara. >
< start="702.1" dur="2.64"> Enwere m ndidi karịa karịa mgbe m malitere, >
< start="704.74" dur="2.07"> na ụzọ Chineke si na-ezi m ndidi >
< start="706.81" dur="3.2"> bụ ihe isi ike ndị ahụ. >
< start="710.01" dur="2.85"> Ugbu a, nsogbu abụghị ụfọdụ usoro nhọrọ >
< start="712.86" dur="2.44"> na ị nwere nhọrọ ị ga-eme na ndụ. >
< start="715.3" dur="2.863"> Ee e, a chọrọ ha, ị nweghị ike ịpụ na ha. >
< start="719.01" dur="3.71"> Iji gụchaa akwụkwọ nke ndụ, >
< start="722.72" dur="1.96"> ị ga-aga ụlọ akwụkwọ nke ọkpọ ọkpọ. >
< start="724.68" dur="2.87"> Ga na-agabiga nsogbu, ha enweghị atụ. >
< start="727.55" dur="1.35"> Nke ahụ bụ ihe Baịbụl kwuru. >
< start="728.9" dur="2.43"> Ihe nke abuo Bible kwuru banyere nsogbu bu nke a. >
< start="731.33" dur="3.923"> Nsogbu na-agbanwe, nke pụtara na ha abụghị otu. >
< start="735.253" dur="2.817"> Don'tnweghi otu nsogbu na otu. >
< start="738.07" dur="1.89"> Na-enweta ọtụtụ ndị dị iche iche. >
< start="739.96" dur="2.11"> Ọ bụghị naanị na ị ga-enweta 'em, kama ị na-enweta ndị dị iche. >
< start="742.07" dur="5"> Ọ na-ekwu mgbe ị na-anwale ọnwụnwa, mgbe ị nwere ụdị nsogbu dị iche iche. >
< start="748.25" dur="2.09"> I nwere ike gbaa okirikiri ma ọ bụrụ na ị na-edetu ihe. >
< start="750.34" dur="3.54"> Mgbe ụdị ọnwụnwa niile batara na ndụ gị. >
< start="753.88" dur="3.25"> Mara, abụ m onye ọrụ ubi, otu oge m wee mụọ ọmụmụ, >
< start="757.13" dur="2.32"> achọpụtara m na gọọmentị dị ebe a >
< start="759.45" dur="2.18"> na United States ka nkewa >
< start="761.63" dur="3.493"> 205 ata di iche iche. >
< start="765.123" dur="4.767"> Echere m na 80% n'ime ha na-eto n'ubi m. (ịchị ọchị) >
< start="769.89" dur="2.52"> M na-echekarị na mgbe m na-akọ akwụkwọ nri, >
< start="772.41" dur="2.85"> Ekwesịrị m ịbanye na Warren's ahihia Ahịa. >
< start="775.26" dur="3.62"> Ma e nwere ọtụtụ ụdị ata, >
< start="778.88" dur="1.82"> ọtutu ọnwunwa di kwa, >
< start="780.7" dur="1.76"> enwere ọtụtụ nsogbu dị iche iche. >
< start="782.46" dur="2.282"> Ha na-abịa n'ọtụtụ nha, ha na-abịa n'ụdị niile. >
< start="784.742" dur="2.898"> E nwere ihe karịrị iri atọ na atọ. >
< start="787.64" dur="2.75"> Okwu a ebe a, ụdị dị iche iche, ebe ọ na-ekwu >
< start="790.39" dur="1.55"> enwere ụdị ọnwụnwa niile na ndụ gị, >
< start="791.94" dur="4.26"> n'eziokwu, n'asụsụ Grik pụtara ọtụtụ ihe. >
< start="796.2" dur="2.795"> N'ikwu ya, enwere otutu ndo nke nchekasị >
< start="798.995" dur="2.205"> na ndụ gị, ị ga-ekwenye na nke ahụ? >
< start="801.2" dur="1.9"> Enwere ọtụtụ ndo nke nrụgide. >
< start="803.1" dur="1.62"> Ha niile eleghi anya otu. >
< start="804.72" dur="2.67"> E nwere nrụgide ụkọ, enwere nsogbu nrụgide, >
< start="807.39" dur="2.37"> enwere ahụ ike, e nwere nrụgide anụ ahụ, >
< start="809.76" dur="1.62"> enwere nsogbu oge. >
< start="811.38" dur="5"> Ọ na-ekwu na ha niile bụcha agba. >
< start="816.41" dur="2.82"> Ma ọ bụrụ n’ị pụọ ma ịzụta ụgbọ ala, ịchọrọ >
< start="819.23" dur="3.44"> agba agba, ị ga-echere ya. >
< start="822.67" dur="2.98"> Ma emechaa, mgbe ị mepụtara ya, ị ga - enweta ụcha omenala gị. >
< start="825.65" dur="2.01"> Nke ahụ bụ eziokwu bụ okwu eji. >
< start="827.66" dur="4.99"> Ọ bụ agba omenala, ọnwụnwa dị ọtụtụ na ndụ gị. >
< start="832.65" dur="2.14"> Chineke kwere ka ihe kpatara ya. >
< start="834.79" dur="3.07"> Fọdụ n'ime nsogbu gị bụ nke emere. >
< start="837.86" dur="1.842"> Somefọdụ n'ime ha bụ ndị niile anyị niile nwetara, >
< start="839.702" dur="2.908"> dị ka nke a, COVID-19. >
< start="842.61" dur="1.95"> Mana ọ na-ekwu na nsogbu na-agbanwe. >
< start="844.56" dur="2.845"> Ma ihe m na-ekwu na nke ahụ bụ na ha dịgasị iche na ike. >
< start="847.405" dur="3.143"> N’aka ozo, lee ka ha si bia. >
< start="850.548" dur="3.792"> Ha na-agbakọta ugboro ugboro, nke ahụ bụ ogologo oge. >
< start="854.34" dur="1.421"> Anyị amaghị ka nke a ga-adịru. >
< start="855.761" dur="2.699"> Anyị amaghị ike etu o si aga. >
< start="858.46" dur="2.197"> Ahụrụ m ihe ịrịba ama n’ụbọchị ahụ nke sị, >
< start="860.657" dur="3.98"> Mmiri na-ezo n'ime ndụ niile, >
< start="864.637" dur="2.743"> "ma nke a bụ ihe nzuzu." (ịchị ọchị) >
< start="867.38" dur="1.9"> Echere m na nke ahụ bụ ụzọ >
< start="869.28" dur="1.77"> ọtụtụ mmadụ na-enwe mmetụta ugbu a. >
< start="871.05" dur="1.92"> Nke a bụ ihe nzuzu. >
< start="872.97" dur="3.07"> Nsogbu adighi agha agha, ha na agbanwe agbanwe. >
< start="876.04" dur="2.86"> Ihe nke ato Jemes kwuru ya n’ihi ya awughi ujo >
< start="878.9" dur="2.87"> bụ nsogbu enweghị atụ. >
< start="881.77" dur="1.6"> Ha anaghị ama amụma. >
< start="883.37" dur="4.01"> Ọ na-ekwu mgbe ọnwụnwa bara ụba n'ime ndụ gị, >
< start="887.38" dur="2.05"> ọ bụrụ na ị na-edetu ihe, kewaa ahịrịokwu ahụ. >
< start="889.43" dur="3.13"> Ha ga-adaba na ndụ gị. >
< start="892.56" dur="3.28"> Lee, nsogbu adịghị abịa mgbe ọ bụla ịchọrọ ya >
< start="895.84" dur="1.6"> ma ọ bụ mgbe ịchọghị ya. >
< start="897.44" dur="1.97"> Ọ na-abịa mgbe ọ chọrọ ịbịa. >
< start="899.41" dur="1.97"> Nke ahụ bụ akụkụ nke ihe kpatara ya kpatara nsogbu. >
< start="901.38" dur="3.05"> Nsogbu na-ab ụ oge kachasị mma. >
< start="904.43" dur="1.582"> Ever nweela mgbe ọ dị gị ka nsogbu >
< start="906.012" dur="2.778"> batara n’ime ndụ gị, ị ga, ọ bụghị ugbu a. >
< start="908.79" dur="2.51"> N’ezie, dị ka ugbu a? >
< start="911.3" dur="3.82"> N'ebe a na Saddleback Church, anyị nọ na nnukwu mkpọsa >
< start="915.12" dur="2.45"> na-eche maka odinihu. >
< start="917.57" dur="3.27"> Na mberede na coronavirus etiwaara. >
< start="920.84" dur="2.06"> M na-aga, ọ bụghị ugbu a. >
< start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Ọ bụghị ugbu a. >
< start="926.75" dur="3.073"> Nweela taya dị larịị mgbe ị bịaghị n'oge? >
< start="931.729" dur="2.361"> Tire gaghị enweta taya eji eme ihe mgbe ị nwere ọtụtụ oge. >
< start="934.09" dur="1.823"> Na-aga ọsọ ọsọ ịga ebe ọ bụla. >
< start="937.12" dur="4.08"> Ọ dị ka nwị wet na akwa ọhụrụ gị >
< start="941.2" dur="4.952"> ka ị na-apụ maka njikọ mgbede dị mkpa. >
< start="946.152" dur="2.918"> Ma ọ bụ kewaa akpa gị tupu gị ekwuo okwu. >
< start="949.07" dur="2.55"> Nke ahụ mere m otu oge >
< start="951.62" dur="1.713"> na Sọnde ogologo oge gara aga. >
< start="956" dur="4.64"> Peoplefọdụ ndị, ha enweghị ndidi, >
< start="960.64" dur="1.77"> ha enweghị ike ichere ọnụ ụzọ na-agbanwe agbanwe. >
< start="962.41" dur="1.72"> Ha nwerezi, ha ga eme ya, >
< start="964.13" dur="2.38"> ha ga-eme ya ugbu a, ha ga-eme ya ugbu a. >
< start="966.51" dur="3.99"> Echetere m ọtụtụ afọ gara aga m nọ na Japan, >
< start="970.5" dur="3.34"> m guzoro n’ọdụ ụgbọ oloko na-eche ụzọ ụgbọ oloko >
< start="973.84" dur="2.55"> ibata, mgbe o mepere, ọnụ ụzọ mepere, >
< start="976.39" dur="3.33"> na nwa okorobịa Japan >
< start="979.72" dur="4.49"> Enweghị m ihe ọ bụla gbara m n'ahụ́ ka m guzo ebe ahụ. >
< start="984.21" dur="5"> Echere m, gịnị kpatara m, gịnị kpatara ugbu a? >
< start="989.9" dur="3.583"> Ha bụ nke a na-akọghị, ha na-abịa mgbe ị chọghị 'em. >
< start="994.47" dur="2.94"> Nwere ike ị gaghị enwe ike ịkọ nsogbu na ndụ gị. >
< start="997.41" dur="3.69"> Hụ ugbu a, o kwuru mgbe ụdị ọnwụnwa niile, mgbe, >
< start="1001.1" dur="3"> ha enweghị atụ, ụdị dị iche iche, ha agbanwe, >
< start="1004.1" dur="3.98"> ịbanye n'ime ndụ gị, nke ahụ bụ ihe a na-enweghị ike ịkọwapụta, >
< start="1008.08" dur="3.213"> ọ sị ha ewela iwe dị ka ndị na-egbochi gị. >
< start="1012.19" dur="1.01"> Kedu ihe ọ na-ekwu ebe a? >
< start="1013.2" dur="2.16"> Agaba, m ga-akọwacha nke a. >
< start="1015.36" dur="2.6"> Mana lee ihe nke anọ Akwụkwọ Nsọ kwuru maka nsogbu. >
< start="1017.96" dur="2.553"> Nsogbu nwere nzube. >
< start="1021.4" dur="2.69"> Nsogbu nwere nzube. >
< start="1024.09" dur="3.07"> Chineke nwere nzube n’ihe niile. >
< start="1027.16" dur="2.72"> Ọbụ ihe ọjọọ ndị na-eme na ndụ anyị. >
< start="1029.88" dur="2.16"> Chineke nwere ike weta ihe ha mma. >
< start="1032.04" dur="1.64"> Ọ bụghị Chineke kpatara nsogbu niile. >
< start="1033.68" dur="2.62"> Imirikiti nsogbu anyị na-akpatara onwe anyị. >
< start="1036.3" dur="2.1"> Ndị mmadụ na-ekwu, gịnị kpatara ndị mmadụ ji arịa ọrịa? >
< start="1038.4" dur="3.69"> Otu ihe kpatara ya bụ na anyị anaghị eme ihe Chineke gwara anyị mee. >
< start="1042.09" dur="3.02"> Ọ bụrụ na anyị rie ihe Chineke gwara anyị ka anyị rie, >
< start="1045.11" dur="2.71"> ọ bụrụ na anyị rahụ ụra dịka Chukwu gwara anyị ka anyị zuru ike, >
< start="1047.82" dur="3.28"> ọ bụrụ na anyị na-emega ahụ dị ka Chineke gwara anyị ka anyị na-eme, >
< start="1051.1" dur="3.16"> ma ọ bụrụ na anyị ekweghị ka echiche ndị na-adịghị mma banye na ndụ anyị >
< start="1054.26" dur="2.06"> ọ bụrụ na anyị erubere Chineke isi, >
< start="1056.32" dur="2.65"> anyị agaghị enwe ọtụtụ nsogbu anyị. >
< start="1058.97" dur="3.07"> Nnyocha e mere egosiwo na ihe dịka 80% nke nsogbu ahụike >
< start="1062.04" dur="3.57"> na obodo a, na America, ka a na-akpọ site na ihe a na-akpọ >
< start="1065.61" dur="3"> nhọrọ ndụ na-adịghị ala ala. >
< start="1068.61" dur="3.05"> N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị anaghị eme ihe ziri ezi. >
< start="1071.66" dur="1.14"> Anyị anaghị eme ahụike. >
< start="1072.8" dur="2.66"> Anyị na-emekarị ihe na-emebi ihe. >
< start="1075.46" dur="2.58"> Mana ihe ọ na-ekwu bụ ebe a, nsogbu nwere nzube. >
< start="1078.04" dur="3.53"> Ọ na - ekwu mgbe nsogbu bịaara gị. >
< start="1081.57" dur="3.46"> mara na ha bia imeputa. >
< start="1085.03" dur="3.56"> Gburugburu nkebi ahịrịokwu ahụ, ha na-abịa mepụta. >
< start="1088.59" dur="3.22"> Nsogbu nwere ike rụpụta ihe. >
< start="1091.81" dur="2.23"> Ugbu a, ha anaghị arụpụta ihe na-akpaghị aka. >
< start="1094.04" dur="3.06"> Nje virus a bụ COVID, ọ bụrụ na m zaghị ya n 'ụbọchị kwesịrị ya. >
< start="1097.1" dur="3.35"> ọ gaghị emepụta ihe ọ bụla dị ukwuu na ndụ m. >
< start="1100.45" dur="2.17"> Ma ọ bụrụ na m zaghachi n'ụzọ ziri ezi, >
< start="1102.62" dur="2.25"> ọbụna ihe ndị kacha njọ na ndụ m >
< start="1104.87" dur="3.89"> pụrụ iweta uto na uru na ngọzi, >
< start="1108.76" dur="2.23"> na ndu gi na ndu m. >
< start="1110.99" dur="2.26"> Ha na-abịa rụpụta ihe. >
< start="1113.25" dur="4.59"> Ọ na-ekwu ebe a na nhụjuanya na nrụgide >
< start="1117.84" dur="5"> na iru uju, ee, na ọrịa nwere ike rụpụta ihe >
< start="1123.42" dur="2.913"> nke bara uru ma ọ bụrụ na anyị ahapụ ya. >
< start="1127.363" dur="3.887"> Ọ bụ na nhọrọ anyị, ọ bụ na omume anyị. >
< start="1131.25" dur="4.043"> Chineke na-eji ihe isi ike na ndụ anyị. >
< start="1136.9" dur="2.33"> Say sị, nke ọma, kedu ka o si eme nke ahụ? >
< start="1139.23" dur="4.04"> Olee otu Chukwu si eji ihe isi ike na nsogbu na ndu anyi? >
< start="1143.27" dur="3.29"> Ọ dị mma, daalụ maka ịrịọ, n'ihi na akụkụ ọzọ >
< start="1146.56" dur="1.75"> ma ọ bụ akụkụ ọzọ nke amaokwu kwuru >
< start="1148.31" dur="2.61"> na Chineke ji ha ụzọ atọ. >
< start="1150.92" dur="3.09"> Uzo ato, Chukwu jiri nsogbu na ndu gi uzo ato. >
< start="1154.01" dur="4.18"> Nke mbu, nsogbu dikwara okwukwe m. >
< start="1158.19" dur="2.03"> Ugbu a, okwukwe gị dị ka akwara. >
< start="1160.22" dur="3.8"> Akwara ike adighi ike ma oburu n’inyocha ya, >
< start="1164.02" dur="3.3"> ọ gwụla ma agbatịghị ya, ọ gwụla ma ọ bụ nrụgide. >
< start="1167.32" dur="4.99"> Zụlite mọzụlụ siri ike site n'imeghị ihe ọ bụla. >
< start="1172.31" dur="3.09"> You tolite mọzụlụ siri ike site na ịgbatị ha >
< start="1175.4" dur="2.53"> ma wusie ha ike ma nwalee ha >
< start="1177.93" dur="2.7"> ma kwagide ha ruo n’ókè. >
< start="1180.63" dur="5"> Ọ na-ekwu na nsogbu bịara ile okwukwe m ule. >
< start="1185.88" dur="4.38"> Ọ na-ekwu ghọta na ha bịara ile okwukwe gị ule. >
< start="1190.26" dur="3.28"> Ugbu a, ule okwu ahụ ebe ahụ, nke ahụ bụ okwu >
< start="1193.54" dur="5"> N’oge Baịbụl, e ji mee ihe iji mee ka ọla dị mma. >
< start="1198.61" dur="3.05"> Ihe ị ga - eme bụ ị ga - ewere ọla dị oke ọnụ ahịa >
< start="1201.66" dur="1.768"> dị ka ọla ọcha ma ọ bụ ọla edo ma ọ bụ ihe ọzọ, >
< start="1203.428" dur="2.932"> you ga-etinye ya n’ime nnukwu ite, ị ga-ekpo ya ọkụ >
< start="1206.36" dur="2.54"> ka oke okpomoku di ike, gini mere? >
< start="1208.9" dur="1.17"> N’ime okpomoku di elu, >
< start="1210.07" dur="3.34"> a gbachapụrụ adịghị ọcha niile ọkụ. >
< start="1213.41" dur="4.05"> Naanị ihe fọdụụrụ ya bụ ezigbo ọla edo >
< start="1217.46" dur="1.946"> ma ọ bụ ọla ọcha dị ọcha. >
< start="1219.406" dur="3.164"> Nke ahụ bụ okwu Greek ebe a maka nnwale. >
< start="1222.57" dur="4.54"> Ọ bụ ọkụ na - anụcha ebe Chineke na - ekpo ọkụ >
< start="1227.11" dur="1.705"> na-anabata nke ahụ na ndụ anyị, >
< start="1228.815" dur="3.345"> Ọ na-ewepụ ihe ndị na-adịghị mkpa. >
< start="1232.16" dur="2.94"> Know mara ihe ga - eme n’izu ole na ole sochirinụ? >
< start="1235.1" dur="2.134"> Ihe anyị niile chere bụ ihe dị mkpa, >
< start="1237.234" dur="1.726"> anyị ga-ahụ, hmm, mụ esoro >
< start="1238.96" dur="1.273"> ọ dị mma na-enweghị nke ahụ. >
< start="1241.1" dur="2.51"> Ọ ga-atagharịa ihe ndị kacha mkpa, >
< start="1243.61" dur="2.41"> nihi na ihe gha agbanwe. >
< start="1246.02" dur="4.22"> Ugbu a, atụ dị mkpa banyere etu nsogbu si nwalee okwukwe gị >
< start="1251.17" dur="4.02"> bụ akụkọ banyere Job n’ime Akwụkwọ Nsọ. >
< start="1255.19" dur="1.75"> Odi akwukwo zuru ezu banyere Job. >
< start="1256.94" dur="3.49"> Know mara, Job bụ nwoke kachasị baa ọgaranya na Bible, >
< start="1260.43" dur="2.74"> n’otu ụbọchị, ihe niile funahụrụ ya. >
< start="1263.17" dur="2.82"> Ezinụ ezinụlọ ya funahụrụ ya, ihe niile o nwere gwụrụ, >
< start="1265.99" dur="3.97"> ndị enyi ya nwụrụ, ndị na-eyi ọha egwu wakporo ezinụlọ ya, >
< start="1269.96" dur="4.567"> o nwere oria di egwu, o na-egbu mgbu nke ukwuu >
< start="1276.283" dur="3.437"> nke ahụ enweghị ike ịgwọ. >
< start="1279.72" dur="1.323"> Ọ dị mma, ọ bụ ọnụ. >
< start="1282.109" dur="3.721"> Ma, Chineke nwara okwukwe ya. >
< start="1285.83" dur="3.27"> Chineke emesighachikwara ya okpukpu abụọ >
< start="1289.1" dur="3.423"> ihe o nwere tupu ọ gabiga nnukwu nnwale ahụ. >
< start="1293.59" dur="2.82"> N'otu oge, m na-agụ see okwu ebe ogologo oge gara aga >
< start="1296.41" dur="2.92"> nke ahụ kwuru na ndị mmadụ dị ka akpa tii. >
< start="1299.33" dur="1.34"> Really maghị n’ezie ihe nọ ‘em >
< start="1300.67" dur="2.67"> ruo mgbe ị tufuru ‘em na mmiri ọkụ. >
< start="1303.34" dur="3.09"> Na mgbe ahụ ị ga - ahụ ihe dị n'ime ha. >
< start="1306.43" dur="2.77"> Ever nwetụla otu n'ime ụbọchị mmiri ọkụ ahụ? >
< start="1309.2" dur="3.763"> Ever nwetụla otu n'ime mmiri ọkụ ahụ izu ma ọ bụ ọnwa? >
< start="1313.82" dur="3.78"> Anyị nọ n'ọnọdụ mmiri ọkụ ugbu a. >
< start="1317.6" dur="2.41"> Ihe g’eme si gi puta bu ihe di n’ime gi. >
< start="1320.01" dur="1.33"> Ọ dị ka ntacha eze. >
< start="1321.34" dur="4.15"> Ọ bụrụ na m nwere ihe nhicha eze na m na-akụ ya, >
< start="1325.49" dur="1.18"> kedu ihe ga-apụta? >
< start="1326.67" dur="0.9"> Say kwuru, nke ọma, eze nhicha ahụ. >
< start="1327.57" dur="1.65"> Mba, ọ bụchaghị. >
< start="1329.22" dur="1.95"> Ọ nwere ike ịsị eze ezé na mpụga, >
< start="1331.17" dur="1.67"> mana enwere ike ịnwe ihendori marinara >
< start="1332.84" dur="2.6"> ma ọ bụ agwa ahụekere ma ọ bụ Mayonezi dị n'ime. >
< start="1335.44" dur="2.92"> Kedu ihe ga-apụta ma ọ bụrụ na a rụgide ya >
< start="1338.36" dur="1.403"> bụ ihe ọ bụla dị na ya. >
< start="1341.13" dur="3.603"> N’ụbọchị dị n’ihu ka ị na --eme ọgwụ nje COVID, >
< start="1346.266" dur="2.224"> ihe g’abia n’ime gị bụ ihe dị n’ime gị. >
< start="1348.49" dur="2.24"> Ọ bụrụ na iwe juru gị obi, nke ahụ ga-apụta. >
< start="1350.73" dur="2.23"> Ọ bụrụ na iwe juru gị obi, nke ahụ ga-apụta. >
< start="1352.96" dur="3.79"> Ma oburu na iwe juputara na iwe ma obu obi ojoo ma obu ikpe >
< start="1356.75" dur="3.46"> ma ọ bụ ihere ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi, nke ahụ ga-apụta. >
< start="1360.21" dur="4"> Ọ bụrụ na ụjọ juputara na nke ahụ, ihe ọ bụla dị gị n’ime >
< start="1364.21" dur="3.52"> bụ ihe ga - apụta ma ọ bụrụ na etinye gị nrụgide. >
< start="1367.73" dur="1.44"> Ọ bụkwa ihe ọ na-ekwu ebe a, >
< start="1369.17" dur="2.23"> nsogbu ndị ahụ na-ele okwukwe m ule. >
< start="1371.4" dur="5"> Know mara, afọ ndị gara aga, ezutere m otu agadi nwoke n'ezie >
< start="1376.98" dur="3.23"> na ogbako ọtụtụ afọ gara aga laghachi na Ọwụwa Anyanwụ. >
< start="1380.21" dur="1.74"> Echere m na ọ bụ Tennessee. >
< start="1381.95" dur="3.91"> Ma ya, agadi nwoke a gwara m otu esi apụ >
< start="1387.13" dur="4.8"> bụ uru kasịnụ na ndụ ya. >
< start="1391.93" dur="2.017"> M wee sị, "Ọ dị mma, achọrọ m ịnụ akụkọ a. >
< start="1393.947" dur="1.523"> "Gwa m ihe niile gbasara ya." >
< start="1395.47" dur="1.67"> Ma ihe ọ bụ ọ rụrụ ọrụ >
< start="1397.14" dur="2.823"> na mbadamba osisi ndu ya nile. >
< start="1400.83" dur="2.41"> Ọ ga-abụ onye na-achọta ndụ ya niile. >
< start="1403.24" dur="3.34"> Ma otu ubochi n'oge onodu aku na uba dara, >
< start="1406.58" dur="3.607"> onye isi ya batara wee kwuwapụta na mberede, "A chụrụ gị ọkụ." >
< start="1411.19" dur="3.54"> Ndị ya niile maara ihe wee pụọ n'ọnụ ụzọ. >
< start="1414.73" dur="4.62"> Ma nwunye ya nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri anọ >
< start="1419.35" dur="3.85"> na ezinụlọ na enweghị ọrụ ọrụ ndị ọzọ gbara ya gburugburu, >
< start="1423.2" dur="2.923"> mbibi wee na-aga n’oge ahụ. >
< start="1427.03" dur="3.5"> Obi-ya we di ume, ya we tua egwu. >
< start="1430.53" dur="1.77"> Offọdụ n’ime unu nwere ike inwe mmetụta ahụ ugbu a. >
< start="1432.3" dur="1.58"> Enwere ike ịhapụ gị. >
< start="1433.88" dur="1.76"> Eleghị anya ị na-atụ egwu na ị ga-abụ >
< start="1435.64" dur="2.63"> tọgbọ n'oge nsogbu a. >
< start="1438.27" dur="2.45"> Obi jọrọ ya njọ, ụjọ na-atụkwa ya. >
< start="1440.72" dur="1.827"> Ọ sịrị, edere m ihe a, ọ sịrị, "Ọ dị m ka >
< start="1442.547" dur="3.97"> "ụwa m mara jijiji n'ụbọchị a chụrụ m n'ọrụ. >
< start="1446.517" dur="2.2"> "Ma mgbe m laa n'ụlọ, m gwara nwunye m ihe mere, >
< start="1448.717" dur="3.57"> "ọ jụkwara, 'Gịnịzi ka ị ga-eme ugbu a?' >
< start="1452.287" dur="2.98"> "M kwuru, mgbe ahụ kemgbe m chụrụ n'ọrụ, >
< start="1455.267" dur="3.9"> "M ga-eme ihe m chọrọ mgbe niile. >
< start="1459.167" dur="1.84"> “Bụrụ onye na-ewu ụlọ. >
< start="1461.007" dur="1.61"> “M ga na-akwụ ụgwọ ụlọ anyị >
< start="1462.617" dur="2.413"> "M ga-abanyekwa n'ọrụ ụlọ iwu." >
< start="1465.03" dur="2.887"> Ọ gwakwara m, "Rick, ị maara ihe mbu m mere >
< start="1467.917" dur="4.13"> "Ọ bụ iwu obere obere motels abụọ." >
< start="1472.965" dur="2.115"> Nke ahụ bụ ihe o mere. >
< start="1475.08" dur="4.267"> Ma ọ sịrị, "N'ime afọ ise, abụ m onye isi ọtụtụ nde mmadụ." >
< start="1480.21" dur="2.99"> Aha nwoke ahụ, onye mụ na ya na-agwa okwu, >
< start="1483.2" dur="3.5"> bụ Wallace Johnson, yana azụmahịa ọ malitere >
< start="1486.7" dur="4.39"> mgbe agbachara ya akwụkwọ a kpọrọ Holiday Inns. >
< start="1491.09" dur="1.44"> Inns ezumike. >
< start="1492.53" dur="2.877"> Wallace gwara m, "Rick, taa, ọ bụrụ na m nwere ike ịchọta >
< start="1495.407" dur="3.13"> "nwoke gbara m ọrụ, m ga-eji obi m niile >
< start="1498.537" dur="2.143"> "kelee ya maka ihe o mere." >
< start="1500.68" dur="2.56"> N’oge ahụ mgbe ọ mere, Aghọtaghị m >
< start="1503.24" dur="2.83"> kedu ihe mere eji chụọ m n'ọrụ, kedu ihe mere eji chụpụ m. >
< start="1506.07" dur="3.94"> Ma mgbe e mechara, achọpụtara m na ọ bụ ihe mere Chineke >
< start="1510.01" dur="4.483"> na atụmatụ dị ebube iji tinye m n'ọrụ nke ndị ọ họọrọ. >
< start="1515.76" dur="3.05"> Nsogbu nwere nzube. >
< start="1518.81" dur="1.17"> Ha nwere ebumnuche. >
< start="1519.98" dur="4.18"> Ghọta na ha bịara imepụta, na otu n'ime ihe mbụ >
< start="1524.16" dur="3.984"> ha mepụtara karịa okwukwe ka ukwuu, ha nwale okwukwe gị. >
< start="1528.144" dur="3.226"> Nọmba nke abụọ, nke a bụ uru nke abụọ nke nsogbu. >
< start="1531.37" dur="3.27"> Nsogbu na-ewusi ntachi obi m. >
< start="1534.64" dur="1.52"> Ha na-azụ ntachi obi m. >
< start="1536.16" dur="2.23"> Nke ahụ bụ akụkụ ọzọ nkebi ahịrịokwu ahụ, ọ na-ekwu >
< start="1538.39" dur="5"> nsogbu ndị a na-abịa nwee ntachi obi. >
< start="1543.45" dur="2.33"> Ha na-etolite ntachi obi na ndụ gị. >
< start="1545.78" dur="1.91"> Gịnị bụ nsonaazụ nke nsogbu na ndụ gị? >
< start="1547.69" dur="1.52"> Nọrọ ike. >
< start="1549.21" dur="2.82"> Ọ bụ ikike nkịtị ịnagide nrụgide. >
< start="1552.03" dur="2.253"> Taa, anyị na-akpọ ya resiliili. >
< start="1555.12" dur="1.79"> Ike ibiaghachi azu. >
< start="1556.91" dur="3.197"> Na otu n'ime àgwà kacha mma nwatakịrị ọ bụla kwesịrị ịmụta >
< start="1560.107" dur="3.473"> na okenye ọ bụla kwesịrị ịmụta bụ resili resili. >
< start="1563.58" dur="2.92"> N'ihi na mmadụ niile dara, onye ọ bụla na-asụ ngọngọ, >
< start="1566.5" dur="2.05"> onye obula gabigara oge ihe isi ike, >
< start="1568.55" dur="3.31"> mmadụ niile na-arịa ọrịa n’oge dị iche iche. >
< start="1571.86" dur="2.39"> Onye ọ bụla nwere ọdịda na ndụ ha. >
< start="1574.25" dur="2.7"> Ọ bụ otu esi ejide nrụgide. >
< start="1576.95" dur="3.613"> Ntachi obi, ị na-akwụsi ike ma na-asọgide. >
< start="1581.52" dur="1.99"> Ọ dị mma, kedu ka ị si amụta ime nke ahụ? >
< start="1583.51" dur="3.53"> Kedụ ka esi mụta ijikwa nrụgide? >
< start="1587.04" dur="2.28"> Site na ahụmịhe, nke ahụ bụ naanị ụzọ. >
< start="1589.32" dur="4.93"> Learn mụta ijide nrụgide na akwụkwọ ọgụgụ. >
< start="1594.25" dur="4.02"> Learn mụta otu esi ejikwa nrụgide na nzukọ ọmụmụ ihe. >
< start="1598.27" dur="3.76"> Mụta ijide nrụgide site n'ime nrụgide. >
< start="1602.03" dur="2.53"> Ma ị maghị ihe dị n’ime gị >
< start="1604.56" dur="3.063"> ruo mgbe etinyeworị gị n'ọnọdụ ahụ. >
< start="1609.77" dur="2.7"> N'afọ nke abụọ nke addka Saddleback, 1981, >
< start="1612.47" dur="1.36"> Enwere m nkụda mmụọ >
< start="1613.83" dur="2.823"> ebe izu ọbụla m chọrọ ị gha arụkwaghịm. >
< start="1617.64" dur="3.88"> Achọrọ m ịkwụsị ya n'ehihie Sọnde ọ bụla. >
< start="1621.52" dur="3.14"> Ma, enwere m ihe isi ike na ndụ m. >
< start="1624.66" dur="2.3"> ma m ga-etinye otu ụkwụ n’iru nke ọzọ >
< start="1626.96" dur="3.19"> dị ka Chukwu, enwetaghị m iwu nnukwu ụka, >
< start="1630.15" dur="1.973"> mana Chukwu, butere m n’izu a. >
< start="1633.01" dur="2.1"> M na-agaghị na-mbà. >
< start="1635.11" dur="2.22"> Obi dị m ụtọ na ike agwụghị m. >
< start="1637.33" dur="3.09"> Obi na-atọ m ụtọ karịa na ike agwụghị Chineke. >
< start="1640.42" dur="1.46"> N'ihi na nke ahụ bụ nnwale. >
< start="1641.88" dur="5"> N'afọ ahụ nke nnwale ahụ, etinyere m mmụọ >
< start="1647.51" dur="3.56"> na mmekọrita na mmetụta nke uche na ikike iche echiche >
< start="1651.07" dur="4.28"> nke ahụ nyere m ohere ka ọtụtụ afọ gachaa ịkụ bọọlụ niile >
< start="1655.35" dur="4.64"> ma na-ejikwa oke nrụgide na anya ọha >
< start="1659.99" dur="2.01"> n'ihi na agabigawo m n’afọ ahụ >
< start="1662" dur="3.363"> Site na nsogbu siri ike pụọ, otu na ibe ya. >
< start="1666.51" dur="5"> Know mara, America enweela mmekọrịta ịhụnanya na ịdị mma. >
< start="1672.57" dur="2.113"> Anyị hụrụ ntụsara ahụ. >
< start="1675.593" dur="3.187"> N’ụbọchị na n’izu n’ihu nsogbu a, >
< start="1678.78" dur="2.58"> ị ga-enwe ọtụtụ ihe na-agaghị ekwe mmekwata. >
< start="1681.36" dur="1.13"> Enweghi nsogbu. >
< start="1682.49" dur="2.95"> Kedu ihe anyị ga - eji aka anyị mee >
< start="1685.44" dur="2.503"> Mgbe ihe niile adịghị mma, >
< start="1688.96" dur="2.52"> mgbe ị ga-anọrịrị >
< start="1691.48" dur="2.1"> mgbe ọ naghị ewute gị. >
< start="1693.58" dur="5"> Know mara, ebumnuche nke triathlon ma ọ bụ ebumnuche nke marathon >
< start="1698.71" dur="3.1"> Ihe a abụghị ọsọ, ọsọsọ ị ga-esi rute ebe ahụ, >
< start="1701.81" dur="1.86"> ọ bụ ihe gbasara ntachi obi. >
< start="1703.67" dur="2.34"> Finish mechara ọsọ ahụ? >
< start="1706.01" dur="2.43"> Kedu otu ị si akwado maka ụdị ihe ahụ? >
< start="1708.44" dur="2.13"> Naanị site na ịgabiga ha. >
< start="1710.57" dur="3.487"> Yabụ mgbe ị setịpụrụ n'oge dị n'ihu, >
< start="1714.057" dur="2.213"> echegbula ya, echegbula ya. >
< start="1716.27" dur="3.02"> Nsogbu na-ewusi ntachi obi m. >
< start="1719.29" dur="3.21"> Nsogbu nwere nzube, ha nwere nzube. >
< start="1722.5" dur="2.6"> Ihe nke ato Jemes gwara anyi banyere nsogbu >
< start="1725.1" dur="3.68"> anyị ga-agabiga bụ na nsogbu tozuru agwa m. >
< start="1728.78" dur="3.68"> Ma o kwuru nke a n’amaokwu anọ nke Jekọb isi otu. >
< start="1732.46" dur="4.18"> Ọ na-ekwu ma, hapụ usoro ahụ gaa n'ihu >
< start="1736.64" dur="4.49"> rue mgbe ị gh’agwa ndi tozuru oke agwa >
< start="1741.13" dur="3.663"> na iguzosi ike n'ezi na enweghị ntụpọ adịghị ike. >
< start="1746.3" dur="1.32"> Ọ bụ na ị gaghị achọ ịnweta nke ahụ? >
< start="1747.62" dur="2.42"> Ọ́ gaghị amasị gị ịnụ ka ndị mmadụ na-ekwu, ị maara, >
< start="1750.04" dur="3.32"> nwanyị ahụ enweghị ntụpọ dị ike n'omume ya. >
< start="1753.36" dur="4.53"> Nwoke ahụ, Nwoke ahụ enweghị ntụpọ dị ike na agwa ya. >
< start="1757.89" dur="3.04"> Kedụ ka ị si nweta ụdị agwa tozuru oke? >
< start="1760.93" dur="4.58"> Hapụ usoro ahụ ruo mgbe ị ghọrọ ndị mmadụ, >
< start="1765.51" dur="3.38"> ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, nke tozuru oke agwa >
< start="1768.89" dur="3.33"> na iguzosi ike n'ezi na enweghị ntụpọ adịghị ike. >
< start="1772.22" dur="2.6"> Know mara, enwere ọmụmụ ihe ama ama nke emere ọtụtụ, >
< start="1774.82" dur="4"> ọtụtụ afọ gara aga na Russia na m na-echeta ide ihe, >
< start="1778.82" dur="4.08"> ọ dịkwa na mmetụta nke otu esi ebi ndụ dị iche >
< start="1782.9" dur="5"> metụtara ogologo ndụ ma ọ bụ afọ ndụ nke anụmanụ dị iche iche. >
< start="1789.11" dur="3.6"> Ha wee tinye ụfọdụ anụmanụ n'ime obibi ha, >
< start="1792.71" dur="2.91"> ha tinyere ụfọdụ anụmanụ ndị ọzọ ihe isi ike >
< start="1795.62" dur="1.89"> na gburugburu ebe obibi siri ike. >
< start="1797.51" dur="2.87"> Ndị sayensị ahụ chọpụtara na anụmanụ ndị ahụ >
< start="1800.38" dur="2.22"> nke edobere n’ime ntụsara ahụ >
< start="1802.6" dur="2.88"> na gburugburu ebe obibi dị mfe, ọnọdụ, >
< start="1805.48" dur="4.73"> ọnọdụ ibi ndụ ndị ahụ, esighị ike. >
< start="1810.21" dur="4.41"> N'ihi na ọnọdụ ndị ahụ dị nfe, ha bịara daa ike >
< start="1814.62" dur="2.22"> ma karie ọrịa. >
< start="1816.84" dur="5"> Na ndị ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma nwụrụ n'oge adịghị anya >
< start="1821.9" dur="2.418"> karịa ndị e nyere ikike ka ha nweta >
< start="1824.318" dur="3.105"> nsogbu nke ndụ. >
< start="1828.72" dur="1.163"> Nke ahụ ọ́ bụghị ihe na-akpali mmasị? >
< start="1830.81" dur="2.2"> Ihe n’ezie maka ụmụ anụmanụ amam n’aka >
< start="1833.01" dur="1.94"> banyere agwa anyị, kwa. >
< start="1834.95" dur="4.92"> Na Omenala Western karịsịa n'ụwa taa, >
< start="1839.87" dur="3.38"> anyị adịla mfe n ’ọtụtụ ụzọ. >
< start="1843.25" dur="1.973"> Ndụ ibi ndụ dị mma. >
< start="1846.94" dur="1.71"> Nzube Chineke nke mbu na ndu gi >
< start="1848.65" dur="2.67"> Nke a bụ ime ka ị dị ka Jizọs Kraịst n'ụdị omume. >
< start="1851.32" dur="1.87"> Ndikere mba nte Christ, anam n̄kpọ nte Christ, >
< start="1853.19" dur="3.94"> ibi ndu dika Kraist, ihu dika Kristi, >
< start="1857.13" dur="2.2"> idi nti nte Christ. >
< start="1859.33" dur="3.62"> Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, ma Akwụkwọ Nsọ na-ekwu nke a ugboro ugboro, >
< start="1862.95" dur="2.13"> mgbe ahụ ka Chukwu ga - eduru gị n'otu ihe ahụ >
< start="1865.08" dur="4.304"> na Jisos gabigara itolite udi gi. >
< start="1869.384" dur="2.786"> I kwuru nke ọma, olee ụdị onye Jizọs bụ? >
< start="1872.17" dur="3.8"> Jizọs bụ ịhụnanya na ọ joyụ na udo na ndidi na obiọma, >
< start="1875.97" dur="2.34"> nkpuru nke Mmuo, ihe ndia nile. >
< start="1878.31" dur="1.4"> Oleekwa otú Chineke si ewepụta ha? >
< start="1879.71" dur="2.9"> Site na itinye anyi n'ọnọdụ di iche. >
< start="1882.61" dur="3.76"> Anyị na-amụta inwe ndidi mgbe anwa anyị ịghara ndidi. >
< start="1886.37" dur="3.37"> Anyị na-amụta ihunanya mgbe a na-eme ka anyị bụrụ ndị na-enweghị ịhụnanya. >
< start="1889.74" dur="2.49"> Anyị na-amụta ọ joyụ n'etiti iru uju. >
< start="1892.23" dur="4.67"> Anyị na-amụta ichere ma nwee ụdị ndidi ahụ >
< start="1896.9" dur="1.56"> mgbe anyị ga-eche. >
< start="1898.46" dur="3.423"> Anyị na-amụta obiọma mgbe a nwara anyị ịchọ naanị ọdịmma onwe anyị. >
< start="1902.77" dur="3.66"> N’ụbọchị na - abịa n’ihu, ọ ga na-abụ ọnwụnwa ike >
< start="1906.43" dur="2.83"> ị na-achọ onye na-achọ ịbanye na blọgụ, dọkpụrụ azụ, >
< start="1909.26" dur="2.54"> m wee sị, Anyị ga na-elekọta anyị anya. >
< start="1911.8" dur="4.22"> M, onwe m, na mụ, ezinụlọ m, anyị anọ ma ọ bụ anọ >
< start="1916.02" dur="2.14"> ma chefuo banyere onye ọ bụla ọzọ. >
< start="1918.16" dur="2.62"> Ma nke ahụ ga-akụda mkpụrụ obi gị. >
< start="1920.78" dur="2.51"> Ọ bụrụ na ị ga-ebido iche gbasara ndị ọzọ >
< start="1923.29" dur="3.254"> ma na-enyere ndị na-adịghị ike aka, ndị agadi >
< start="1926.544" dur="4.026"> na ndị nwere nsogbu preex, >
< start="1930.57" dur="3.47"> ọ bụrụkwa na ị ga-eme mgbali, mkpụrụ obi gị ga-eto, >
< start="1934.04" dur="3.34"> obi gị ga-eto, ị ga-abụ ezigbo mmadụ >
< start="1937.38" dur="5"> na njedebe nke nsogbu a karịa ka ị nọrọ na mmalite, ọ dị mma? >
< start="1943.52" dur="2.98"> Chineke, mgbe ị chọrọ iwulite omume gị, >
< start="1946.5" dur="1.37"> ọ nwere ike iji ihe abụọ. >
< start="1947.87" dur="2.92"> O nwere ike iji Okwu ya, eziokwu gbanwere anyị, >
< start="1950.79" dur="3.56"> ọ nwekwara ike iji ọnọdụ, nke siri ike karịa. >
< start="1954.35" dur="4"> Ugbu a, ọ ga-aka mma ka Chineke jiri ụzọ mbụ, Okwu ahụ. >
< start="1958.35" dur="1.63"> Ma anyị anaghị a listena ntị n'okwu ahụ mgbe niile. >
< start="1959.98" dur="3.77"> ya mere o jiri onodu di iche-iche iji lebara anyi anya. >
< start="1963.75" dur="4.6"> Ọ na-esikwa ike, ma ọ na-akakarị uru. >
< start="1968.35" dur="3.23"> Ugbu a, ị kwuru, nke ọma, dịkwa mma, Rick, enwetawo m ya, >
< start="1971.58" dur="4.22"> na nsogbu ndị ahụ dị mgbanwe ma ha nwere nzube, >
< start="1975.8" dur="3.18"> ha no ebea inwale okwukwe m, ha gha abia >
< start="1978.98" dur="2.47"> ụdị dị iche iche, ha anaghị abịa mgbe m chọrọ 'em. >
< start="1981.45" dur="4.393"> Na Chukwu nwere ike iji 'em tolite agwa m ma zuo ndu m. >
< start="1986.95" dur="1.72"> Yabụ kedu ihe m ga - eme? >
< start="1988.67" dur="4.94"> N'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ ma n'izu na ma eleghị anya ọnwa ga-abịa >
< start="1993.61" dur="3.75"> ka anyị na-ezute nsogbu Coronavirus ọnụ, >
< start="1997.36" dur="4.09"> kedu ka m ga-esi meghachi omume nye nsogbu na ndụ m? >
< start="2001.45" dur="1.98"> Anaghị m ekwu naanị maka nje. >
< start="2003.43" dur="2.747"> M na-ekwu banyere nsogbu ga-abịa n'ihi ya >
< start="2006.177" dur="5"> nke ịhapụ ọrụ ma ọ bụ ụmụaka ịnọ n'ụlọ >
< start="2011.26" dur="3.12"> ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emebi ndụ >
< start="2014.38" dur="1.553"> dị ka ọ na-adịbu. >
< start="2017.04" dur="2.24"> Kedụ ihe m ga - eme maka nsogbu nke ndụ m? >
< start="2019.28" dur="2.9"> Ọ dị mma, ọzọ, James akọwapụtara nke ọma, >
< start="2022.18" dur="3.39"> Ọ na-enyekwa anyị ụzọ atọ dị irè, >
< start="2025.57" dur="4.45"> azịza ha na-agbanwe agbanwe, mana ha bụ azịza ziri ezi. >
< start="2030.02" dur="1.32"> N’ezie, mgbe m gwara gị nke mbụ, >
< start="2031.34" dur="2.21"> ị na-aga, ị ga na-achọgharị m. >
< start="2033.55" dur="3.07"> Mana enwere nzaghachi atọ, ha niile malitere na R. >
< start="2036.62" dur="2.76"> Ihe izizi ọ zara bụ mgbe ịnọ >
< start="2039.38" dur="4.46"> n'oge ihe isi ike, rejoiceụrịa ọ .ụ. >
< start="2043.84" dur="2.41"> Go na-aga, ị na-egwu egwu? >
< start="2046.25" dur="1.73"> Nke ahụ dara ụda masochistic. >
< start="2047.98" dur="2.29"> Anaghị m ekwu na ị rejoiceụrị ọ overụ n'ihi nsogbu a. >
< start="2050.27" dur="1.69"> Soro m na obere oge a. >
< start="2051.96" dur="3.54"> Ọ na-ekwu na ya bụ ọ joyụ dị ọcha. >
< start="2055.5" dur="2.69"> Were nsogbu ndị a dịka ndị enyi. >
< start="2058.19" dur="1.78"> Ugbu a, ghọtahiela m. >
< start="2059.97" dur="3.14"> Ọ naghị ekwu na ọ bụ ihe adịgboroja. >
< start="2063.11" dur="3.57"> Ọ naghị ekwu na yikwasị ya ọchị ọchị, >
< start="2066.68" dur="2.33"> ime ka ihe di nma na odighi, >
< start="2069.01" dur="1.36"> n'ihi na ọ bụghị. >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Little Orphan Annie, anwụ >
< start="2073.49" dur="3.512"> ọ ga-apụta echi, ọ nwere ike ọ gaghị apụta echi. >
< start="2077.002" dur="3.568"> Ọ naghị ekwu na ọ gọnarị eziokwu. >
< start="2080.57" dur="2.76"> Ọ naghị ekwu be ịbụ onye hụrụ anya. >
< start="2083.33" dur="2.87"> Oh nwa nwoke, a ga m ata ahụhụ. >
< start="2086.2" dur="1.72"> Chineke kpọrọ ụfụ asị dịka ị na-eme. >
< start="2087.92" dur="2.1"> Ehee, m ga-ata ahụhụ, ụdị. >
< start="2090.02" dur="3.49"> Ma ị nwere ebe a na-eche ịnwụ n'ihi okwukwe, yana imata, >
< start="2093.51" dur="1.937"> Naanị m nwere mmụọ nke mmụọ a mgbe obi adịghị m. >
< start="2095.447" dur="2.983"> Saa bere no, na ,sorosoroni, Onyankopɔn Ba no sɛ tosorosoroni no Ba. >
< start="2098.43" dur="1.54"> Chineke achọghị ka i nwee >
< start="2099.97" dur="3.453"> echiche ndị hụrụ mmụọ n'anya n'ihe mgbu. >
< start="2104.74" dur="2.5"> Know mara, echetara m otu oge m na-agabiga >
< start="2107.24" dur="3.21"> oge siri ezigbo ike na enyi na-achọ inwe obi ọma >
< start="2110.45" dur="2.307"> ha wee sị, "Rick, makwaa >
< start="2112.757" dur="1.86"> "n'ihi na ihe nwere ike njọ." >
< start="2115.61" dur="2.14"> Ma maa ihe, ha kara njọ. >
< start="2117.75" dur="2.23"> O nyeghị m aka ma ọlị. >
< start="2119.98" dur="2.225"> Enwere m obi ọerụ ma ha njọ. >
< start="2123.31" dur="4.588"> Yabụ na ọ bụghị maka echiche ziri ezi Pollyanna. >
< start="2127.898" dur="3.352"> Ọ bụrụ na m na-anụ ọkụ n'obi, m ga-anụ ọkụ n'obi. >
< start="2131.25" dur="2.88"> Ee e, mba, mba, mba, ọ karịrị, ọ dị omimi karịa nke ahụ. >
< start="2134.13" dur="5"> Anyị anaghị a rejoiceụrị ọ ,ụ, gee ntị, anyị anaghị a rejoiceụrị ọ forụ maka nsogbu ahụ. >
< start="2140.17" dur="5"> Anyị na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ na nsogbu ahụ, ebe anyị nọ na nsogbu ahụ, >
< start="2145.71" dur="2.13"> a ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-a rejoiceụrị ọ aboutụ. >
< start="2147.84" dur="2.92"> Ọbụghị nsogbu ahụ n’onwe ya, kama ihe ndị ọzọ >
< start="2150.76" dur="2.514"> na anyị nwere ike ị rejoiceụrị ọ aboutụ banyere nsogbu ndị ahụ. >
< start="2153.274" dur="2.836"> Gịnị mere anyị nwere ike iji rejoiceụrịa ọ inụ ọbụlagodi nsogbu ahụ? >
< start="2156.11" dur="2.54"> 'Mee ka anyị mara na enwere ebumnuche maka ya. >
< start="2158.65" dur="1.74"> N’ihi na anyị ma na Chineke agaghị ahapụ anyị. >
< start="2160.39" dur="2.97"> Maka na anyị ma ọtụtụ ihe dị iche iche. >
< start="2163.36" dur="1.81"> Anyị ma na Chineke nwere nzube. >
< start="2165.17" dur="4.58"> Rịba ama na o kwuru na ya dị ka ọ joyụ dị ọcha. >
< start="2169.75" dur="1.98"> Nọgide na-atụgharị uche n'okwu ahụ. >
< start="2171.73" dur="4.8"> Tulee ụzọ iji kpachara anya mezie uche gị. >
< start="2176.53" dur="2.22"> I nwere mmezi omume >
< start="2178.75" dur="1.71"> na ị ga-eme ebe a. >
< start="2180.46" dur="3.869"> Nhọrọ ị na-eme ị toụrị ọ ?ụ? >
< start="2184.329" dur="3.201"> Na Abụ Ọma 34 amaokwu nke mbụ, ọ na-ekwu >
< start="2187.53" dur="3.69"> Aga m agọzi Jehova oge niile. >
< start="2191.22" dur="1.39"> N'oge niile. >
< start="2192.61" dur="0.92"> Ọ si, Mu onwem g .me. >
< start="2193.53" dur="2.48"> Ọ bụ nhọrọ nke uche, ọ bụ mkpebi. >
< start="2196.01" dur="1.66"> Ọ bụ nkwa, ọ bụ nhọrọ. >
< start="2197.67" dur="4.08"> Ugbu a, ị ga-agabiga n'ọnwa ndị dị n'ihu >
< start="2201.75" dur="2.4"> ya na obu ezigbo agwa ya ma obu odi ya nma. >
< start="2204.15" dur="2.7"> Ọ bụrụ na omume gị dị njọ, ị ga-eme onwe gị >
< start="2206.85" dur="2.35"> ihe ọjọ gi na ndi nile gbara gi gburugburu. >
< start="2209.2" dur="3.15"> Ma ọ bụrụ na omume gị dị mma, ọ bụ nhọrọ gị ị rejoiceụrị ọ .ụ. >
< start="2212.35" dur="1.76"> Say sị, ka anyị leba anya n'akụkụ dị mma. >
< start="2214.11" dur="3.09"> Ka anyi chọta ihe anyi g’eji kelee Chukwu. >
< start="2217.2" dur="2.15"> Ka anyi ghota na obu ihe ojoo. >
< start="2219.35" dur="2.88"> Chineke p bringr bring iwep good ezi ihe site na nd bad ojoo. >
< start="2222.23" dur="2.29"> Ya mere mee mgbanwe omume. >
< start="2224.52" dur="3.25"> Agaghị m enwe obi ilu na nsogbu a. >
< start="2227.77" dur="3.23"> M ga-aka mma na nsogbu a. >
< start="2231" dur="4.39"> Aga m ahọrọ, ọ bụ nhọrọ m ị toụrị ọ .ụ. >
< start="2235.39" dur="3.41"> Ọ dị mma, nọmba abụọ, R bụ nke abụọ. >
< start="2238.8" dur="4.08"> Nke ahụ bụkwa rịọ Chineke maka amamihe. >
< start="2242.88" dur="3.29"> Nke a bụ ihe ịchọrọ ịme oge ọ bụla ị nọ na nsogbu. >
< start="2246.17" dur="2.39"> Ichoro Chineke ka o nye gi amamihe. >
< start="2248.56" dur="2.1"> Izu gara aga, ọ bụrụ na ịgere ntị n’ozi izu gara aga, >
< start="2250.66" dur="2.72"> ma ọ bụrụ na uche gị, laghachi na ntanetị ma lee ozi ahụ >
< start="2253.38" dur="5"> na-eme ya na ndagwurugwu nke virus na-enweghị egwu. >
< start="2260.09" dur="2.15"> Ọ bụ nhọrọ gị ị rejoiceụrị ọ ,ụ, >
< start="2262.24" dur="2.733"> mana mgbea juo Chineke amamihe. >
< start="2265.89" dur="2.13"> Na-arịọkwa Chineke ka o nye gị amamihe ma na-ekpekwa ekpere >
< start="2268.02" dur="1.51"> ị na-ekpekwa ekpere banyere nsogbu gị. >
< start="2269.53" dur="2.99"> Amaokwu asaa kwuru nke a na Jems otu. >
< start="2272.52" dur="4.83"> Ọ bụrụ n’usoro a, onye ọ bụla n'ime unu amaghị etu e si ezukọ >
< start="2277.35" dur="4.05"> ụdị nsogbu ọ bụla, nke a esighị na ntụgharị Phillips. >
< start="2281.4" dur="2.24"> Ọ bụrụ n’usoro a, onye ọ bụla n’ime unu amaghị etu e si ezute >
< start="2283.64" dur="3.44"> nsogbu obula gi aghaghi iju Chineke >
< start="2287.08" dur="2.65"> Onye n givesmere madu nile ihe ọma >
< start="2289.73" dur="2.6"> n’emeghị ka obi ha ju ha ikpe. >
< start="2292.33" dur="3.45"> Ma ị ga-ejide n’aka na amamihe dị mkpa >
< start="2295.78" dur="1.963"> ka agenye gi. >
< start="2298.65" dur="2.18"> Ha na-ekwu gịnị kpatara ihe niile m ga-eji arịọ maka amamihe >
< start="2300.83" dur="1.35"> n'etiti nsogbu? >
< start="2303.29" dur="2.07"> Yabụ imuta ya. >
< start="2305.36" dur="1.57"> Yabụ ị ga - amụta site na nsogbu, >
< start="2306.93" dur="1.48"> ya mere i jiri rịọ maka amamihe. >
< start="2308.41" dur="4.26"> Ọ bara uru karịa ma ọ bụrụ na ị ga-akwụsị ịjụ ihe kpatara ya, >
< start="2312.67" dur="3.04"> kedu ihe kpatara ihe a ji mee, ma bido jụọ, >
< start="2315.71" dur="1.45"> kedu ihe ichoro ka m muta? >
< start="2318.09" dur="1.92"> Kedu ihe ị chọrọ ka m bụrụ? >
< start="2320.01" dur="2.27"> Kedu ka m ga - esi na nke a? >
< start="2322.28" dur="2.17"> Kedụ ka m ga - esi bụrụ ezigbo nwanyị? >
< start="2324.45" dur="4.51"> Kedụ ka m ga - esi ghọrọ ezigbo mmadụ site na nsogbu a? >
< start="2328.96" dur="1.32"> Ee, ana m anwale. >
< start="2330.28" dur="1.53"> Agaghị m echegbu onwe m maka ihe kpatara ya. >
< start="2331.81" dur="1.71"> Gịnị kpatara na ọ baghịdị mkpa. >
< start="2333.52" dur="3.77"> Ihe dị mkpa bụ, kedu ihe m ga-aghọ, >
< start="2337.29" dur="3.7"> gịnịkwa ka m ga-amụta n’ọnọdụ a? >
< start="2340.99" dur="2.71"> Na iji mee nke ahụ, ị ​​ga-achọrọ amamihe. >
< start="2343.7" dur="2.56"> Ọ na-ekwu mgbe ọ bụla ịchọrọ amamihe, jụọ Chineke, >
< start="2346.26" dur="1.61"> Chukwu goziere gi ya. >
< start="2347.87" dur="2.2"> Yabụ I kwuru, Chukwu, achọrọ m amamihe dị ka mama. >
< start="2350.07" dur="3.23"> Kidsmụ m ga-anọ n'ụlọ maka ọnwa na-abịa. >
< start="2353.3" dur="2.22"> Achọrọ m amamihe dị ka nna. >
< start="2355.52" dur="3.48"> Kedụ ka m si eduzi mgbe ọrụ anyị nwere nsogbu >
< start="2359" dur="1.553"> na enweghị m ike ịrụ ọrụ ugbu a? >
< start="2362.05" dur="1.45"> Rịọ Chineke ka o nye gị amamihe. >
< start="2363.5" dur="1.84"> Ajula ihe kpatara ya, kama juo gini. >
< start="2365.34" dur="2.99"> Yabụ na mbụ ị rejoiceụrịa ọ ,ụ, ị ga-enweta ezigbo echiche >
< start="2368.33" dur="3.14"> Nkwupụta, aga m ekele Chineke ọ bụghị maka nsogbu ahụ, >
< start="2371.47" dur="3.14"> mana aga m ekele Chukwu n’ime nsogbu. >
< start="2374.61" dur="2.92"> N'ihi na Chineke dị mma ọbụlagodi na ndụ adịghị ndụ. >
< start="2377.53" dur="2.137"> Ọ bụ ya mere m ji kpọọ usoro isiokwu a >
< start="2379.667" dur="5"> "Ezi okwukwe na arụ ọrụ mgbe ndụ anaghị arụ." >
< start="2385.41" dur="1.473"> Mgbe ndụ anaghị arụ ọrụ. >
< start="2387.96" dur="1.69"> Ana m a rejoiceụrị ọ andụ, ana m arịọ. >
< start="2389.65" dur="4.32"> Ihe nke ato James gwara ka eme bu izu ike. >
< start="2393.97" dur="4.83"> Ee, ọ dị ka ọfụma pụọ, enweta onwe gị >
< start="2398.8" dur="3.86"> ha nile na ikpo ha. >
< start="2402.66" dur="2.64"> Enwela oke nrụgide na ị nweghị ike ịme ihe ọ bụla. >
< start="2405.3" dur="1.33"> Echegbula onwe gị banyere ọdịnihu. >
< start="2406.63" dur="2.83"> Chukwu kwuru na a ga m elekọta gị, tụkwasị m obi. >
< start="2409.46" dur="2.42"> You tụkwasịrị Chukwu obi mara ihe kachasị mma. >
< start="2411.88" dur="2.17"> Gị na ya na-arụkọ ọrụ. >
< start="2414.05" dur="4.84"> Ikpatulata ọnọdụ ị na-aga. >
< start="2418.89" dur="3.07"> Ma na ị sị, Chineke, a ga m zuru ike. >
< start="2421.96" dur="2.28"> Anaghị m enwe obi abụọ. >
< start="2424.24" dur="1.87"> Anaghị m enwe obi abụọ. >
< start="2426.11" dur="2.76"> Aga m atụkwasị gị obi n'ọnọdụ a. >
< start="2428.87" dur="3.15"> Amaokwu nke asatọ bụ amaokwu ikpeazụ anyị ga-eleba anya. >
< start="2432.02" dur="1.26"> Ọ dị mma, anyị ga-elele otu ọzọ na nkeji. >
< start="2433.28" dur="5"> Mana amaokwu nke asatọ kwuru, mana ị ga-ajụrịrị na ezigbo okwukwe >
< start="2438.9" dur="2.49"> na-enweghị obi abụọ nzuzo. >
< start="2441.39" dur="1.86"> Kedu ihe ị na-arịọ maka ezi okwukwe? >
< start="2443.25" dur="1.57"> Rịọ maka amamihe. >
< start="2444.82" dur="2.07"> Ma kwue, Chineke, a chọrọ m amamihe, ana m ekelekwa gị >
< start="2446.89" dur="1.26"> ị ga-enye m amamihe. >
< start="2448.15" dur="2.89"> Ekele m gị, ị na-enye m amamihe. >
< start="2451.04" dur="3.06"> Emekpala obi, obi abụọ, >
< start="2454.1" dur="2.57"> kama weputara ya Chineke. >
< start="2456.67" dur="5"> Know mara, Akwụkwọ Nsọ kwuru na mbido mgbe m mere ka ọ pụta ìhè >
< start="2461.67" dur="3.24"> na o kwuru ọtụtụ ụdị nsogbu a. >
< start="2464.91" dur="1.8"> Know mara, anyị na-ekwu maka ha hiri nne, >
< start="2466.71" dur="2.23"> ọtụtụ, ọtụtụ nsogbu. >
< start="2468.94" dur="2.81"> Okwu ahụ n'asụsụ Grik, ọtụtụ ụdị nsogbu, >
< start="2471.75" dur="3.11"> bụ otu okwu ahụ kpuchiri na mbụ na Peter >
< start="2474.86" dur="1.97"> isi nke anọ, amaokwu nke anọ kwuru >
< start="2476.83" dur="4.11"> Chineke nwere ọtụtụ amara inye gị. >
< start="2480.94" dur="3.35"> Ọtụtụ amara nke Chukwu. >
< start="2484.29" dur="5"> Ọ bụ otu multicolored, multifeatured, dị ka diamond. >
< start="2489.339" dur="1.694"> Gịnị ka ọ na-ekwu ebe ahụ? >
< start="2492.28" dur="2.08"> Maka nsogbu niile ị nwere, >
< start="2494.36" dur="2.87"> amara dị n’aka Chukwu nke dị. >
< start="2497.23" dur="5"> Maka ụdị ọnwụnwa na mkpagbu niile >
< start="2502.74" dur="4.5"> ma ihe isi ike, enwere ụdị amara na obi ebere >
< start="2507.24" dur="2.25"> ye odudu emi Abasi oyomde ndinọ fi >
< start="2509.49" dur="2.05"> iji gboo nsogbu ahụ. >
< start="2511.54" dur="2.04"> Ichọrọ amara maka nke a, ịchọrọ amara maka nke a, >
< start="2513.58" dur="1"> ịchọrọ amara maka nke a. >
< start="2514.58" dur="3.76"> Chineke na-ekwu na amara m dị ka multifeatured >
< start="2518.34" dur="1.99"> dika nsogbu ndi n’acho ihu. >
< start="2520.33" dur="1.27"> Gịnịzi ka m na-ekwu? >
< start="2521.6" dur="1.74"> Ana m ekwu na nsogbu niile dị na ndụ gị, >
< start="2523.34" dur="2.44"> gụnyere nsogbu COVID a, >
< start="2525.78" dur="4.03"> ekwensu putara imeri gi na nsogbu ndi a. >
< start="2529.81" dur="4.41"> Ma Chineke pụtara imebe gị site na nsogbu ndị a. >
< start="2534.22" dur="3.543"> Ọ chọrọ iji merie gị, Setan, mana Chineke chọrọ imepe gị. >
< start="2539.44" dur="2.12"> Ugbu a, nsogbu ndị batara na ndụ gị >
< start="2541.56" dur="3.34"> emela onwe gị ka ị bụrụ ezigbo mmadụ. >
< start="2544.9" dur="2.51"> Otutu ndi mmadu ghuru ndi mmadu obi ilu site na 'em. >
< start="2547.41" dur="3.28"> Ọ naghị eme gị ezigbo mmadụ ọzọ. >
< start="2550.69" dur="2.96"> Ọ bụ omume gị na-eme ka ihe dị iche. >
< start="2553.65" dur="2.86"> Ọ bụ ebe ahụ ka m chọrọ inye gị ihe ọzọ ị ga-echeta. >
< start="2556.51" dur="3.07"> Nọmba anọ, ihe nke anọ ị ga-echeta >
< start="2559.58" dur="3.75"> mgbe ị na-enwe nsogbu bụ icheta >
< start="2563.33" dur="1.99"> nkwa nke Chineke. >
< start="2565.32" dur="1.84"> Cheta nkwa nke Chineke. >
< start="2567.16" dur="1.28"> Nke a bụ amaokwu nke iri na abụọ. >
< start="2568.44" dur="1.52"> Ka m gụpụtara gị nkwa a. >
< start="2569.96" dur="2.363"> Jems isi otu, amaokwu nke iri na abụọ. >
< start="2573.55" dur="5"> Ngọzi na-adịrị onye na-anọgidesi ọnwụnwa ike, >
< start="2579.84" dur="2.67"> n'ihi na mgbe o guzoro ule, >
< start="2582.51" dur="5"> ọ ga-enweta okpueze nke ndụ Chineke kwere nkwa, >
< start="2587.82" dur="2.75"> Okwu ahụ dịịrị ndị hụrụ ya n'anya. >
< start="2590.57" dur="0.833"> Ka m gụghachi ya. >
< start="2591.403" dur="2.057"> Achọrọ m ka ị gee ya ntị nke ọma. >
< start="2593.46" dur="5"> Ngọzi na-adịrị onye na-anọgidesi ọnwụnwa ike, >
< start="2598.84" dur="3.36"> Onye na-edozi ihe isi ike, >
< start="2602.2" dur="2.12"> dị ka ọnọdụ anyị ugbu a. >
< start="2604.32" dur="3.67"> Onye agọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-atachi obi bụ onye na-anọgidesi ike, >
< start="2607.99" dur="3.87"> Onye tukwasiri Chineke obi, Onye na-ekwenye ekwenye n'okpuru onwunwa, >
< start="2611.86" dur="3.12"> n’ihi na mgbe ọ kwụsịrị ịnwale ule ahụ, na-apụta >
< start="2614.98" dur="2.72"> na azụ, ikpe a agaghị agwụ. >
< start="2617.7" dur="1.4"> Enwere njedebe ya. >
< start="2619.1" dur="2.07"> Ga-apụta na nsọtụ ọzọ nke okporo mmiri ahụ. >
< start="2621.17" dur="4.41"> You ga-enweta okpueze nke ndụ. >
< start="2625.58" dur="3.38"> Ọ dị mma, amataghị m ihe nke ahụ pụtara, mana ọ dị mma. >
< start="2628.96" dur="2.7"> Oyiyi ndu nke Chineke kwere nkwa >
< start="2631.66" dur="2.373"> Maka ndị hụrụ ya n'anya. >
< start="2635.73" dur="2.32"> Ọ bụ nhọrọ gị ị rejoiceụrị ọ .ụ. >
< start="2638.05" dur="2.92"> Ọ bụ nhọrọ gị ịtụkwasị obi na amamihe nke Chukwu >
< start="2640.97" dur="1.72"> kama inwe obi abụọ. >
< start="2642.69" dur="4.21"> Rịọ Chineke ka o nye gị amamihe ga-enyere gị aka n'ọnọdụ gị. >
< start="2646.9" dur="3.23"> Ma juo Chineke ka o nwee okwukwe iji tachie obi. >
< start="2650.13" dur="2.27"> Ma kwue, Chineke, ike agaghị agwụ m. >
< start="2652.4" dur="1.793"> Nke a ga-agabiga. >
< start="2655.329" dur="2.111"> A jụọ mmadụ onye, ​​kedu nke kacha amasị gị >
< start="2657.44" dur="0.833"> amaokwu nke Akwụkwọ Nsọ? >
< start="2658.273" dur="1.297"> Kwuru, o mezuru. >
< start="2659.57" dur="1.273"> Yabụ kedu ihe masịrị amaokwu ahụ. >
< start="2660.843" dur="2.687"> Maka na mgbe nsogbu bịara, amaara m na ha abịaghị ịnọ. >
< start="2663.53" dur="1.194"> Ha mere. >
< start="2665.84" dur="2.88"> Ma nke ahụ bụ eziokwu na ọnọdụ a. >
< start="2668.72" dur="3.983"> Ọ bụghị ịbịa ka ọ nọrọ, ọ na-abịa. >
< start="2673.56" dur="2.24"> Ugbu a, achọrọ m imechi echiche a. >
< start="2675.8" dur="3.77"> Ọgba aghara abụghị naanị ikewa nsogbu. >
< start="2679.57" dur="3.23"> Ọ na-ekpughere ha mgbe mgbe, ọ na-ekpughere ha mgbe mgbe. >
< start="2682.8" dur="4.563"> Ọgba a nwere ike kpughere ụfọdụ ọgbaghara na alụmdi na nwunye gị. >
< start="2688.77" dur="2.76"> Ọgba aghara a nwere ike ikpughe ụfọdụ mgbawa >
< start="2691.53" dur="1.823"> na mmekọrịta gị na Chineke. >
< start="2694.26" dur="5"> Nsogbu a nwere ike ikpughe ụfọdụ mgbawa na ụzọ ibi ndụ gị, >
< start="2699.29" dur="2.593"> na ị na-eme ka onwe gị sie ike. >
< start="2702.949" dur="3.181"> Gbalịanụ kwe ka Chineke gwa gị okwu >
< start="2706.13" dur="5"> banyere ihe chọrọ ịgbanwe na ndụ gị, ọ dị mma? >
< start="2711.45" dur="1.7"> Achọrọ m ka ị chee maka izu a, >
< start="2713.15" dur="3.44"> ma ka m nye gị ụfọdụ usoro dị mma, ọ dị mma? >
< start="2716.59" dur="2.47"> Nzọụkwụ bara uru, nke mbụ, achọrọ m gị >
< start="2719.06" dur="5"> iji gbaa onye ozo ume listena nti na ozi a. >
< start="2724.55" dur="1.25"> Yoù ga-eme nke ahụ? >
< start="2725.8" dur="3.603"> You ga - agbanye njikọ a ma zigara ya enyi? >
< start="2729.403" dur="3.337"> Ọ bụrụ na nke a gbara gị ume, nyefee ya, >
< start="2732.74" dur="2.3"> bụrụ onye nkuzi n’izu a. >
< start="2735.04" dur="4.84"> Onye ọ bụla nọ gị nso chọrọ agbamume n’oge nsogbu a. >
< start="2739.88" dur="1.779"> Ya mere ziga ‘em njikọ. >
< start="2741.659" dur="5"> Izu uka abuo gara aga mgbe anyi nwere ulo uka n’ogbe ndi a >
< start="2747.52" dur="3.11"> na Lake Forest na ogige anyị niile nke Saddleback, >
< start="2750.63" dur="3.53"> ihe dị ka puku mmadụ iri atọ bịara ụka. >
< start="2754.16" dur="4.14"> Mana izu a gara aga mgbe anyị kwesịrị ịkagbu ọrụ >
< start="2758.3" dur="1.87"> m niile lere anya na ntanetị, m kwuru, >
< start="2760.17" dur="3.38"> mmadu obula gakwuru ndi nke obere ma kporo ndi agbata obi gi >
< start="2763.55" dur="2.94"> kpọọ ndị enyi gị ka ha soro gị obere, >
< start="2766.49" dur="0.95"> anyị dị 181,000 >
< start="2767.44" dur="5"> ISPs nke ụlọ anyị ejikọtara aka na ọrụ ahụ. >
< start="2776.3" dur="3.41"> Nke ahụ putara na o nwere ike ịbụ ọkara nde mmadụ >
< start="2779.71" dur="1.96"> kiriri ozi izu gara aga. >
< start="2781.67" dur="3.04"> Oru nde mmadu ma obu karie. >
< start="2784.71" dur="3.63"> Maka gịnị, maka na ị gwara onye ọzọ ka ọ lelee. >
< start="2788.34" dur="4.56"> Achọrọ m ịgba gị ume ka ị bụrụ onye akaebe nke ozi ọma >
< start="2792.9" dur="2.79"> izu a n’ụwa nke ozi ọma na-achọsi ike. >
< start="2795.69" dur="1.4"> Ọ dị ndị mmadụ mkpa ịnụ nke a. >
< start="2797.09" dur="1.18"> Zipu njikọ. >
< start="2798.27" dur="5"> Ekwere m na anyị nwere ike ịgba otu nde mmadụ izu a >
< start="2803.29" dur="3.8"> ọ bụrụ na anyị niile ga-agafe na ozi, ọ dị mma? >
< start="2807.09" dur="3.16"> Nke abuo, ma oburu na ino n’ulo pere mpe, anyi adighi agba egwu >
< start="2810.25" dur="3.45"> nwee ike izute, opekata mpe ọnwa a, nke ahụ bụ n'aka. >
< start="2813.7" dur="3.95"> Yabụ na aga m agba gị ume ịhazi nzukọ mebere. >
< start="2817.65" dur="1.79"> Nwere ike ịnwe otu ịntanetị. >
< start="2819.44" dur="0.97"> Kedu ka ị si eme nke ahụ? >
< start="2820.41" dur="2.63"> Ọ dị mma, enwere ngwaahịa dị ka Zoom. >
< start="2823.04" dur="2.52"> Want chọrọ inyocha nke ahụ, Zoo, ọ bụ n'efu. >
< start="2825.56" dur="2.56"> You nwere ike ịga ebe ahụ gwa mmadụ niile ka ha bia >
< start="2828.12" dur="1.74"> Na ekwentị ma ọ bụ na kọmputa ha, >
< start="2829.86" dur="3.58"> you nwere ike ijikọ mmadụ isii ma ọ bụ asatọ ma ọ bụ mmadụ iri, >
< start="2833.44" dur="3.15"> ị nwekwara ike ịnwe otu gị n'izu a na Zoom. >
< start="2836.59" dur="3.19"> You nwere ike ihu ihu ibe, dịka Facebook Live, >
< start="2839.78" dur="2.933"> ma ọ bụ dị ka ụfọdụ ndị ọzọ, ị maara, >
< start="2844.84" dur="5"> ihe dị na iPhone mgbe ịlele FaceTime. >
< start="2850.12" dur="1.82"> Ọ dị mma, ịnweghị ike iji otu buru ibu mee nke ahụ >
< start="2851.94" dur="2.39"> mana inwere ike iji otu mmadu mee ya. >
< start="2854.33" dur="3.52"> Ma n’uzi n’otu n’otu n’otu n’iru na ihu na teknụzụ. >
< start="2857.85" dur="2.66"> Anyị nwere teknụzụ enweghị nke ugbu a. >
< start="2860.51" dur="3.59"> Yabụ lelee Zoom maka obere igwe mebere otu. >
< start="2864.1" dur="1.17"> Ma ebe a n'ịntanetị >
< start="2865.27" dur="1.85"> ị nwekwara ike ịnweta ụfọdụ ozi, kwa. >
< start="2867.12" dur="3.244"> Nọmba atọ, ọ bụrụ na ịnọghị na obere ìgwè, >
< start="2870.364" dur="4.096"> Aga m enyere gị aka ịbanye n’otu ịntanetị n’izu a, aga m. >
< start="2874.46" dur="2.33"> Ihe ichoro ime bu bu email m, >
< start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback, otu okwu, SADDLEBACK, >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, m ga-ejikọ gị >
< start="2887.64" dur="2.57"> ka ndị otu ntanetị, ọ dị mma? >
< start="2890.21" dur="2.79"> Gbalịa hụ na ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke Saddleback Church >
< start="2893" dur="2.84"> gụọ akwụkwọ akụkọ gị kwa ụbọchị nke m na-eziga >
< start="2895.84" dur="2.03"> ụbọchị niile n’oge nsogbu a. >
< start="2897.87" dur="2.1"> A na-akpọ ya "Saddleback na Home." >
< start="2899.97" dur="3.5"> Ọ nwere ndụmọdụ, ọ nwere ozi na-agba ume, >
< start="2903.47" dur="2.14"> a natala ozi ị nwere ike iji. >
< start="2905.61" dur="1.56"> Ezigbo ihe. >
< start="2907.17" dur="2.17"> Anyị chọrọ ka gị na gị na-emekọ kwa ụbọchị. >
< start="2909.34" dur="1.32"> Nweta "Saddleback n'ụlọ." >
< start="2910.66" dur="2.69"> Ọ bụrụ na enweghị m adreesị ozi-e gị, >
< start="2913.35" dur="1.42"> mgbe ahụ ị naghị enweta ya. >
< start="2914.77" dur="2.46"> Ma ị nwere ike izitere m email address gị >
< start="2917.23" dur="4.41"> na PastorRick@saddleback.com, aga m etinye gị na listi, >
< start="2921.64" dur="2.37"> ị ga-enweta njikọta ụbọchị, >
< start="2924.01" dur="3.76"> akwụkwọ akụkọ "Saddleback in the Home" kwa ụbọchị. >
< start="2927.77" dur="2.09"> Achọrọ m ikpechi tupu m na-ekpe ekpere >
< start="2929.86" dur="2.15"> site n'ikwu ọzọ, ahụrụ m gị n'anya. >
< start="2932.01" dur="1.72"> Ekpesiri m gị ekpere kwa ụbọchị, >
< start="2933.73" dur="1.9"> ana m agakwa n’ihu maka gị. >
< start="2935.63" dur="2.68"> Anyị ga-enweta nke a. >
< start="2938.31" dur="2.33"> Nke a abụghị njedebe nke akụkọ ahụ. >
< start="2940.64" dur="3.4"> Chineke ka nocheche ya, ma Chineke gha akpo ihe a >
< start="2944.04" dur="4.16"> ime ka okwukwe gị too, ime ka ndi mmadu nwe okwukwe. >
< start="2948.2" dur="1.8"> Onye ma ihe gha eme. >
< start="2950" dur="3.07"> Anyị nwere ike inwe revival nke mmụọ site n'ihe ndị a niile >
< start="2953.07" dur="2.66"> n’ihi na ndị mmadụ na-echigharịkwuru Chineke mgbe niile >
< start="2955.73" dur="1.87"> mgbe ha gabigara oge ihe isi ike. >
< start="2957.6" dur="1.09"> Ka m kpee ekpere maka gị. >
< start="2958.69" dur="1.66"> Nna, achoro m ikele m ndi mmadu >
< start="2960.35" dur="1.48"> Onye na-ege ntị ugbu a. >
< start="2961.83" dur="5"> Ka anyị bie ndụ nke James isi otu, >
< start="2967.39" dur="2.78"> amaokwu isii mbụ ma ọ bụ asaa. >
< start="2970.17" dur="4.25"> Ka anyị mụta na nsogbu bịara, ha na-eme, >
< start="2974.42" dur="5"> ha agbanwe agbanwe, ha nwere nzube, na ọ bụrụ na ị ga >
< start="2979.81" dur="2.41"> jiri ha mee ihe ọma na ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-atụkwasị gị obi. >
< start="2982.22" dur="1.49"> Nyere anyị aka ịghara inwe obi abụọ. >
< start="2983.71" dur="4"> Nyere anyị aka ị rejoiceụrị ọ toụ, ịrịọ, Onyenwe anyị, >
< start="2987.71" dur="3.53"> na icheta nkwa gi. >
< start="2991.24" dur="3.45"> M na-ekpekwa ekpere maka mmadụ niile ka ha nwee izu ike. >
< start="2994.69" dur="2.87"> N’aha Jizọs, amen. >
< start="2997.56" dur="1.07"> Chukwu gozie gi, onye obula. >
< start="2998.63" dur="1.823"> Nyefee ya na onye ọzọ. >